NEWS COLLECTION: March 2009
ဧရာဝတီ Tuesday, 31 March 2009
ကမ္ဘာကျော် Time မဂ္ဂဇင်းကြီး၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ယခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့သြဇာ အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁ဝဝ ကို ဆန္ဒမဲပေး ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က နံပါတ် ၂၅ နေရာတွင် ရောက်ရှိနေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခု သတင်းရေးနေသည့် အချိန်တွင် ဆန္ဒမဲပေါင်း သုံးသိန်း သုံးထောင်ကျော် ရရှိနေသည်။
ဒေါ်စုသည် မဲပေါင်း သုံးသိန်း သုံးသောင်းကျော် ရရှိသည့် အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား (နံပါတ် ၁၆) နှင့် များစွာ ဝေးကွာခြင်းမရှိဘဲ မလေးရှားနိုင်ငံ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် အန်နဝါ အီဗရာဟင် (နံပါတ် ၂၆) ထက် အနည်းငယ် အသာရနေသည်။
တခြား သြဇာရှိ အမျိုးသမီးများ အဖြစ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ နန်စီပလိုစီ (နံပါတ် ၂၇)၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (နံပါတ် ၃၆) တို့ကို ကမ္ဘာတလွှားမှ စာဖတ်သူများက ရွေးချယ်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
“၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခင်ကထက် ထောက်ခံမှု ပိုမို ရရှိခဲ့သည်” ဟု Time မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်စုနှင့်ပတ်သက်၍ မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြရာတွင် “ထင်ရှားသည့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည်၊ သူ၏ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် အနှစ် ၂ဝ အတွင်း အများအားဖြင့် အကျယ်ချုပ် ချခံနေရသည်၊ နိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို အရေးယူပေးရန် ကုလသမဂ္ဂကို တွန်းအား ပေးလျက်ရှိသည်” ဟု ဆိုသည်။
၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် Time မဂ္ဂဇင်းက အင်တာနက်မှတဆင့် အာရှသူရဲကောင်း အဖြစ်ရွေးချယ်သည့် သဘောထား ကောက်ယူမှု တခု ပြုလုပ်ရာ စာဖတ်ပရိသတ် ၄ဝ.၄ ရာခိုင်နှုန်းက ဒေါ်စုကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
လူမှုဆက်သွယ်ရေး အင်တာနက် ဘလော့ဂ်များတွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပရိသတ် အများအပြားကို တွေ့နိုင်သည်။ ကမ္ဘာကျော် facebook အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် အသင်းဝင် သုံးသောင်းကျော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံသူများ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားကြသည်။
“မိတ်ဆွေသစ်တွေ ရဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာပြည် အခြေအနေတွေကို လူအများကြီး သိသွားအောင် လုပ်ဖို့ဆိုရင် Facebook ကနေ လုပ်ဆောင်သွားရင် အင်မတန် ကောင်းပါတယ်” ဟု မြန်မာပြည် အရေး ဆောင်ရွက်နေသူ ဇိုယာဖန်းက ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် တစောင်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
“ကမ္ဘာက ဒေါ်စုကို မေ့သွားအောင်လို့ စစ်အစိုးရက ဒေါ်စုကို ဖမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ရပ်တွေ မအောင်မြင်ဘူး ဆိုတာ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေက တဆင့် လုပ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ဇိုယာဖန်းက ဆိုသည်။
Time မဂ္ဂဇင်း၏ ကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁ဝဝ ကို http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1883644_1886141,00.html တွင် မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေးလိုပါက
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1883644_1883653_1884572,00.html သို့ သွားရောက်နိုင်သည်။
ကိုယ့်လူကိုယ် ရာထူးတိုး နေရာပေး တတ်သည်ဟု သတင်းကြီးသော ယနေ့ မြန်မာ့ တပ်မတော်တွင် မကြာသေးမီက စစ်ခေါင်းဆောင် တဦး ရာထူး တက်သွားသည်။
ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခံရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦးသည် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးနှင့် နီးစပ်သူ ဖြစ်သောကြောင့် ဤရာထူးတိုးမှုမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ဖက်ရေးရာ လေ့လာသူများက သုံးသပ်နေကြသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့ကြားက အားပြိုင်မှု တခုလို့ ယူဆရတယ်”ဟု ရန်ကုန်မှ စစ်ရေးအကဲခတ်တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောပြသည်။
တပ်မတော်၏ နံပါတ်တစ် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦးကို ရာထူးတိုးပေးသည့် နည်းဖြင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ စစ်ရေးအကဲခတ်က ဆိုသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်း ဤသို့သော ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းမျိုးကို အများပြည်သူ သိရှိရန် တရားဝင် ထုတ်ပြန်လေ့ မရှိပေ။ အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားသည့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ပါရှိသော အသုံးအနှုန်းများမှတဆင့် ရာထူးအပြောင်းအလဲများကို သိရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ထိုသို့ ရာထူးတိုးပေးခြင်းမှာ ယုံကြည် စိတ်ချရသူ တဦးတယောက်တည်းကို အားကိုးအားထားပြုရသည့် အခြေအနေသို့မရောက်ရန် လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူတဦးက သုံးသပ်သည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်း နဲ့ ဗိုလ်ချုပ် တင်အောင်မြင့်ဦးကြားမှာ အားပြိုင်ခိုင်း၊ ကစားခိုင်းတာပဲ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အနေနဲ့ တယောက်တည်းကိုပဲ အားကိုးတာမျိုး မဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ ယူဆရတယ်” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ ဦးညိုအုန်းမြင့်က ဆိုသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ဂိုဏ်း ၃ ခု ရှိသည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်း၊ ယခု ရာထူးတက်သွားသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ စသည့် ထင်ရှားသည့် ဗိုလ်ချုပ်များက ထိုအုပ်စုသုံးခုကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု အကဲခတ်တချို့က သုံးသပ်ကြသည်။
သို့သော်လည်း ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ထို သုံးဦးသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုအပေါ် သစ္စာရှိရမည်၊ အဆိုပါ မိသားစုက ငြိုငြင်မည်ကို စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့ကြသည်ဟု စစ်တပ်အသိုင်းအ၀န်းနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦးသည် ရာထူးတက်လာသဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် အဆင့် ၅ ရှိသူဖြစ်လာသည်။ သူ၏ အထက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်တို့ ရှိသည်။ စစ်အစိုးရအဖွဲ့တွင်မူ အတွင်းရေးမှူး (၁) တာဝန် ရရှိထားသဖြင့် အဆင့် ၃ ရှိသူ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦးသည် အမှတ် ၁ စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်၏ တပ်မမှူး အဖြစ်မှ ၁၉၉၇ တွင် အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် နအဖ အဖွဲ့အတွင်း အရေးပါသည့် တာဝန်ဖြစ်သည့် အတွင်းရေးမှူး ၁ ရာထူးနေရာကို ရခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦးသည် တပ်မတော်အတွင်း လူမှုဆက်ဆံရေး အားနည်းပြီး အပြောအဆို ကြမ်းတမ်းကြောင်း၊ သဘောထား တင်းမာသူတဦး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်းသည် တပ်မတော် ကြည်းရေလေညှိနှိုင်းရေးမှူး တာဝန် ယူထားသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်မှ ပညာရှင်များနှင့် ရင်းနှီးသူအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေသည် အမှတ် ၅ အထူးစစ်ဆင်ရေးမှူး ဖြစ်သည်။ ယခင်က ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ကို တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည်။
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွင် မြန်မာကလေးငယ်နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံး ၊ တဦးအလောင်း ပြန်တွေ့
သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ မတ်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
တရုတ် နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့် ကျယ်ဂေါင်သို့ သွားရောက်ပြီး ပလပ်စတစ်ဗူး ခွံများကို ကောက်ယူသည့် မြန်မာ ကလေးငယ်နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံး သွားပြီး ဆယ်နှစ်အရွယ် ကလေး အလောင်းကို ရွှေလီမြစ် အတွင်းသို့ ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်မြို့မှ တရုတ်ပြည်၊ ကျယ်ဂေါင်မြို့သို့ သွားရောက်ကာ ပလပ်စတစ်ဗူးခွံ ကောက် နေသည့် မြန်မာမိသားစုမှ ကလေးငယ်နှစ်ဦးသည် မတ်လ၂၇ ရက်နေ့က ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရာ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဆယ်နှစ်အရွယ် မြန်မာကလေးငယ်အလောင်းကို ရွှေလီမြစ်အတွင်း ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
မူဆယ်မြို့၊ ဂေါက်ကွင်းအနီးတွင် နေထိုင်ပြီး ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားနေသည့် ဦးဝင်းဦး၏ သားနှစ်ဦးသည် ကျယ်ဂေါင်မြို့တွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်ဟု ဦးဝင်းဦးနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ ဦးဝင်းဦးက အရင်က ရွှေလီဘက်မှာ နေတာ။ မူဆယ်ဘက်ကို ရောက်လာတာ သိပ်မကြာ သေးဘူး။ သူ့မိန်းမရယ် အခုအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့ ဆယ်နှစ်အရွယ် အကြီး ကောင်ရယ်၊ အငယ်ဆုံး ရှစ်လသားအရွယ်လေးရယ် ကျယ်ဂေါင်မှာ ဖျော်ရည်ဖူးခွံတို့ ဘာတို့ သွားကောက်တာ။ အဲဒီမှာ ပျောက်သွားတာ။ သူ့အမေက တနေရာ ကလေးက တနေရာ ရှိတုန်း အလစ်သုတ်သွားတာပေါ့။ ဟိုအကြီးကောင်တော့ တရုတ်စကား တတ်တယ်၊ လည်လည်ဝယ်ဝယ်လည်းရှိတော့ ရောင်းစားလို့ မရမှန်းသိတော့ သတ်လိုက် ပုံရတယ်။ ”
ယမန်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မီးသတ်ဌာနတို့က အလောင်းအား ဆည်ယူခဲ့ပြီး ကျယ်ဂေါင် ရဲစခန်းသို့ သယ်ဆောင်သွားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ကျယ်ဂေါင် ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“အခုရှိနေတဲ့ ရွှေလီမြစ်ကူးတံတားအသစ်နားမှာဘဲ အရင်တံတားဟောင်းရှိတယ်။ အုတ်တိုင် တွေဘဲ ရှိတော့တယ်။ အဲဒီအုတ်တိုင်ကြားထဲမှာ အလောင်းကို သွားထည့် ထားတာ။ အဲဒီမှာ အလောင်းကို ပြန်ထုတ်တာ အတော်လေးလုပ်ရတယ်။ လက်ပြန် ကြိုးတွေတုတ်ထားတယ်။ ပါးစပ်ကို အ၀တ်နဲ့ ဆို့ထားတယ်။ ဒဏ်ရာတွေတော့ မမြင်ရဘူး။ အနားကို မကပ်ရဘူး ဆိုတော့။”
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ကလေးငယ်များခိုးပြီး ရောင်းစားသည့် လူခိုးဂိုဏ်းများရှိနေပြီး ကလေးငယ်များကို ဆိုင်ကယ်များဖြင့် လုယူထွက်ပြေး ခိုးယူမှုများရှိနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ယုဇန လဖက်မှာ အ၀ါရောင် ဆိုးဆေးပါ ဆိုပြီး စင်ကာပူမှ တားမြစ်
မြန်မာ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၉) ရက်တွင် လက်ဖက် (၅၇) မျိုးအား Auramine O ဆိုးဆေး ပါရှိသည့်အတွက် ထပ်မံတား မြစ်လိုက်ပြီး နောက် စင်ကာပူ နိုင်ငံကလည်း စင်ကာပူ သို့တင်သွင်း နေသည့် မြန်မာ လက်ဖက် အမျိုးအစား (၂၀) ကို Auramine O ပါဝင်မှုကြောင့် တားမြစ် ပိတ်ပင် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အေပီ သတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။
Auramine O အ၀ါရောင်ဆိုးဆေးသည် ပိုးချည်ထည်၊ သားရေ စသည်တို့အား အရောင်ဆိုးသည့် စက်မှုသုံး ဆိုးဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် အစားအသောက်များတွင် အသုံးမပြုရန် တားမြစ်ထားကြောင်း စင်ကာပူလယ်ယာသီးနှံနှင့် တိရစ္ဆာန်ဌာန (AVA) ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာသည့် လက်ဖက်များကို အ၀ါရောင်ဆိုးဆေး ပါမပါ စမ်းသပ်ပြီးမှ ရောင်းချခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သည်။
အ၀ါရောင် ဆိုးဆေးသုံးသည်ဟု စင်ကာပူအစိုးရက သတ်မှတ်ထားသည့် လက်ဖက်အမျိုး (၂၀) တွင် အရီးတောင်း၊ ယုဇန၊ ဇရမ်း၊ ရွှေတုတ်၊ ဦးကာကာ၊ စိုးဝင်း၊ M&N စသည့် လက်ဖက်တံဆိပ်များ ပါဝင်သည်။ ထူးခြားသည့်အချက်မှာ စင်ကာပူက ပိတ်ပင်လိုက်သည့် မြန်မာလက်ဖက်အမျိုးအစား (၂၀) တွင် မြန်မာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တားမြစ်မှုမရှိခဲ့သည့် ယုဇနလက်ဖက် (၈) မျိုးပါဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဗဟိုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA) မှ ဒေါက်တာကျော်လင်းကို ခေတ်ပြိုင်မှ မေးမြန်းရာ “အဲဒါတော့ စင်ကာပူက ကိစ္စက သူတို့ကိစ္စပဲလေ။ သူတို့ဘယ်လိုစစ်သလဲ။ ဘာကိုတွေ့လို့လဲ။ တွေ့လို့ပိတ်တာလား။ မတွေ့ဘဲနဲ့ပိတ်တာလားသူတို့ကိစ္စ။ ကျနော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်။ ကျနော်အစည်းအဝေးရှိလို့ ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်နော်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယခုလ (၁၂) ရက်တွင် လက်ဖက်အမျိုးအစား (၄၃) မျိုးကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် (၅၇) မျိုး ထပ်မံတားမြစ်ခဲ့ရာ ယခုတားမြစ်ခံရသည့် လက်ဖက်အမျိုးအစား (၁၀၀) ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးကလည်း “မြန်မာတွေရဲ့ နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာပါတဲ့ လက်ဖက်ကို ဆိုးဆေးတွေပါတယ်ဆိုပြီး အခုမှ FDA ထကြေညာတယ်ဆိုတော့ အရင်က မစစ်ခဲ့လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် နောက်ပိုင်းမှ ဆေးဆိုးလာကြတာလား။ ဘာမှသဲသဲကွဲကွဲ မသိရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ FDA ဌာနရှိခဲ့တာလည်း ကြာပြီလေ။ လက်ဖက်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ ရိုးရာအစားအသောက် ကြာလှပြီ။ အခုမှ တွေ့တယ်ပြောတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့ လည်း အတွေ့မခံဘဲ ရှောင်နေတယ်။ သတင်းစာပါကြေညာ သာသာပဲ သတင်းရေးလို့ရတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မလုပ်နိုင် ကြဘူးဖြစ်နေတယ်” ဟု လက်ဖက်တွင် ယခုမှ Auramine O ဆိုးဆေး တွေ့ရှိလာမှုအပေါ် ရှင်းလင်းစွာမသိရကြောင်း ပြောသည်။
FDA မှ လက်ဖက်တွင် ဆိုးဆေးပါရှိမှုကို တွေ့ရသည့်အကြောင်းများ ဆောင်းပါးများ ရေးသားဖော်ပြသွားမည်ဟု ဒေါက်တာကျော်လင်းက ပြောသော်လည်း မည်သည့်စာစောင်တွင် ဖော်ပြသွားမည်ကို ပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပေ။
“ကျနော်တို့ကြားတာတော့ နမ့်ဆမ် လက်ဖက်ခြောက်စက်ရုံကို လက်ဖက်တောင်သူတွေက လက်ဖက်ပေးသွင်းမှု မရှိဘူးဆိုတာကြားတယ်။ နောက် အဲဒီလက်ဖက်ခြောက်စက်ရုံက စစ်တပ်ပိုင်ဖြစ်ပြီး လက်ဖက်ကို အပြင်ပေါက်ဈေးထက် အများကြီးခွာကောက်နေတယ်ဆိုတာတွေတော့ ကြားတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့လည်း မပြောတတ်ဘူး” ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် လက်ဖက်ပွဲရုံပိုင်ရှင်တဦးက ဆိုသည်။
မြန်မာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက လက်ဖက်အမျိုးအစား (၁၀၀) ကို တားမြစ်လိုက်ခြင်းကြောင့် လက်ဖက်ရောင်းအား (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ခန့်အထိ ကျဆင်း သွားကြောင်း ဘုရင့်နောင် အခြေစိုက် လက်ဖက်ပွဲရုံများက ပြောသည်။
“အခုတော့ တစ၀င်ရင်တစ လာစစ်ပါတဲ့။ FDA က အဲလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ တစဆိုတာက ပွဲရုံကိုရောက်လာတဲ့ နယ်ဝင်အစတစပေါ့နော်။ လက်ဖက်သားတစကို ယူသွားပြီးစစ်ရတယ်။ သူတို့က ကင်းလွတ်တယ်ဆို ရောင်းလို့ရတယ်။ ဥပမာ ဒီနေ့ သီပေါနယ်က လက်ဖက် အိတ်နှစ်ဆယ်ဝင်ရင် အဲဒီထဲက တချို့ကိုယူပြီး တခါသွားစစ်ရတယ်။ တခါ စစ်ခ (၂,၀၀၀) ပေးရတယ်။ နမ့်ဆမ်ဘက်က ထပ်ဝင်ရင် ထပ်သွားစစ်။ အဲလိုလုပ်နေရတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ့်တံဆိပ်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာ ဘာမှမသိရသေးဘူး” ဟု တားမြစ်မှုစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဘုရင့်နောင် လက်ဖက်ပွဲရုံတခုမှ အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ဖြူးထားသည့် လက်ဖက်များကိုလည်း ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ကြရသဖြင့် ဆုံးရှုံး မှုများစွာ ရှိခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။
မန္တလေးမြို့ခံတဦးက “ကျမတို့လို လက်ဖက်ကြိုက်တဲ့ သူတွေအဖို့ကတော့ နာမည်ကြီးတံဆိပ်အတော်များများ ပါသွားတော့ ၀ယ်ရ တာခက်တာပေါ့။ တားမြစ်တံဆိပ်တွေ အကုန်လုံးလည်း မှတ်မထားနိုင်ဘူး။ မပါနိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ တံဆိပ်တွေ ၀ယ်စားကြတာပဲ။ အဲဒီထဲမှာ ပါရင်တော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ လက်ဖက်မှာ ဆိုးဆေးပါတယ်ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြေညာပေး တာကောင်း ပါတယ်။ မသိရင် ဘယ်အချိန်ထိ ခံနေရဦးမလဲ မသိနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီလိုပဲ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ခံခဲ့ကြရတာလဲဆိုတာလည်း မသိကြရဘူး” ဟု ဆိုသည်။
အော်ရာမင်းအို အ၀ါရောင်ဆိုးဆေးသည် diarylmethane ဆိုးဆေးဖြစ်ပြီး Basic yellow 2, Pyocatanium aureum, aizen auramine, Pyoktanin Yellow, Canary Yellow, Pyoktanin, C.I. 41000 ဟုလည်း ခေါ်သည်။ အော်ရာမင်းအို နှင့် ထိတွေ့မိလျှင် အသားအရေ မျက်စိ ယားယံခြင်း၊ အသားလောင်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်စေသည်။
NEJ / မတ်လ(၃၁) ရက်၊ ၂၀၀၉
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဂျာနယ်ထုတ်ဝေရေးနှင့် ဗလာစာအုပ်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်နေသည့် Eleven Media Group နှင့် ယမကာ ထုတ်လုပ်သည့် Lucky Eleven Whisky ကုမ္ပဏီ ကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဖြေရှင်းရမည့်အစား စာပေစိစစ်ရေးဌာနက ကြော်ငြာ ဖော်ပြခွင့် ပိတ်ပင်သည့်နည်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးနေကြောင်း Lucky Eleven Whisky ကုမ္ပဏီဘက်နှင့် ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ အသိုင်းအဝိုင်းများက ပြောသည်။
Lucky Eleven Whisky ကုမ္ပဏီ ကြော်ငြာဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ကျနော်တို့ ဝီစကီ ကြော်ငြာတွေကို ဂျာနယ်တွေမှာ ထည့်တော့ Eleven Media Group က သတိပေးကြေညာချက်ထုတ်တယ်။ ကျနော်တို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဝီစကီ နာမည်နဲ့ သူတို့နာမည် ဆင်တူသလို ဖြစ်နေပြီး သူတို့ သိက္ခာကျပါတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ ကြော်ငြာ ဆက်ထည့်ရင် ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီကိုရော၊ ကြော်ငြာထည့်ပေးတဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုပါ တရားစွဲမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်း ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကိုယ် သက်ဆိုင်ရာမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး တရားဝင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာ။ ဒီတော့ ကြော်ငြာဆက်ထည့်တယ်။ ဂျာနယ်တိုက်တွေကလည်း ထည့်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြော်ငြာတွေကို မထည့်ရဘူးလို့ စာပေစိစစ်ရေးက ပိတ်ပင်လိုက်တယ်။ တချို့ဂျာနယ်တွေဆို ကြော်ငြာထည့်ဖို့ စာချုပ် ချုပ်ထားတာ တကြိမ်မှတောင် မထည့်ရသေးဘူး။ တကယ်ဆို ဒီကိစ္စ တရားရုံးမှာ ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စ။ ဒါကို စာပေစိစစ်ရေးက တရားရုံးအထက်ကနေ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘော၊ ဥပဒေကို မလေးစားတဲ့သဘော သက်ရောက်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ တဦးကလည်း ၎င်းတို့ဂျာနယ်တွင် ကြော်ငြာထည့်ရန် စာချုပ် ချုပ်ထားပြီးသော်လည်း စာပေစိစစ်ရေးက ခွင့်မပြုခြင်းကြောင့် တကြိမ်မှ ထည့်ခွင့်မရတော့ဘဲ ငွေကြေးများစွာ နစ်နာဆုံးရှုံးကြောင်း၊ အမှန်တိုင်းဆိုပါက အဆိုပါကိစ္စသည် တရားရုံးတွင် ဖြေရှင်းရမည့်ကိစ္စသာဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ရန်ကုန်စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝိုင်းကမူ စစ်အစိုးရ စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ ယခုလုပ်ရပ်သည် ပထမဦးဆုံး မဟုတ်ကြောင်း၊ အာဏာရ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကုမ္ပဏီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကိစ္စ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စ စသည့် အကြောင်းအရာ အမြောက်အမြား၌ ပုံနှိပ်ဖော်ပြ ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းအားဖြင့် တရားရုံးအထက်က အဖွဲ့အစည်း သဖွယ် ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
အမှန်အတိုင်းဆိုပါက အစိုးရကို မထိခိုက်သည့် စာပေစိစစ်ရေးမူများကို မထိခိုက်သည့်အကြောင်းအရာတို့ကို ဖော်ပြခွင့်ပေးပြီး သက် ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကာယကံရှင်များက မကျေနပ်ပါက တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ကြရမည်ဖြစ်သော် လည်း ယခု စာပေစိစစ်ရေး၏ ပြုမူပုံများသည် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ချိုးဖောက်နေ ရုံမျှမက တရားဥပဒေ၏ အထက်ကပါ ရပ်တည် လုပ် ကိုင်နေ သည့်သဘော သက်ရောက်ကြောင်း ရန်ကုန်စာနယ်ဇင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန် UNHCR ရုံးကို ကုလသမဂ္ဂက စာရင်းစစ်မှု နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်များ
မျိုးချစ်သူ ၈၈ မတ်လ(၃၁) ရက်၊ ၂၀၀၉
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းအတွက် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ ၀ယ်ပေးထားသည့် ကားများသာမက ကွန်ပျူတာများ၊ လေအေးစက် များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များပါ စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ စစ်သောအခါ ၎င်းပစ္စည်းများမှာ ရုံးတွင်မရှိဘဲ ပတ်သက်ရာ လူကြီးများ၏ အိမ်တွင် ရောက်ရှိနေသောကြောင့် ပစ္စည်းကို အကောင်အထည်ဖြင့် ပြ၍ မရခဲ့ကြောင်း၊ UNHCR မှ စေလွှတ်သော နိုင်ငံခြားအစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းမှ လူကြီးနှင့် အဆင်ပြေသော အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သာ မကြာခဏ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းနိုင်ငံခြားမှ ပြန်လာသောအခါ လူကြီးများအတွက် တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်များဖြင့် ပြန်လည်ဂါရ၀ပြုရကြောင်း ကြားသိရ၏။
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအမည်ခံ အဖွဲ့အစည်းမှာ UNHCR Representative အဖြစ် အိန္ဒိယလူမျိုး ရန်ကုန်တွင် (၃) နှစ်လုပ်စဉ်က ယခင်အတွင်းရေးမှူး (၁) ခင်ညွန့် နှင့် ပလဲနံပသင့်စေရန်လည်းကောင်း၊ ခင်ညွန့်မှလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ လေးစားမှုရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မတီဟု အမည်ခံ အဖွဲ့အစည်းကို ယခင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးတင်လှိုင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်စေ၍ သံအမတ်ကြီးဟောင်းတဦး (ဦးဝင်းလွင်) မှ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၎င်းရုံးခန်း၏ ပိုင်ရှင်မှာ သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းလွင် ဖြစ်ပြီး တလလျှင် USD (၂၅၀) ဖြင့် (၁၂) လစာကို အပြည့်အ၀ ပေးချေခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းရုံးအတွက် လိုအပ်သော ရုံးသုံးပစ္စည်း၊ လေအေးပေးစက် (၅) လုံး၊ ကွန်ပျူတာ (၂) လုံး၊ လက်ပ်တော့ (Laptop)၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ဆိုနီကင်မရာ အကောင်းစားများကို သံအမတ်ကြီး တောင်းသမျှ UNHCR Representative မှ မငြင်းနိုင်ဘဲ ၀ယ်ယူပေးခဲ့ရသည်ဟု သိရပါသည်။
၎င်းရုံးခန်းပြင်ဆင် စရိတ်သန်း (၃၀) ခန့်ကိုလည်း UNHCR မှ ပေးချေခဲ့ရသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ မည်သူမှ ဘယ်သောအခါမှ ရုံးမထိုင်ဖြစ်ခဲ့သော ထိုမြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအမည်ခံ အဖွဲ့အစည်းရုံးခန်းအတွက် ၀ယ်ယူပေးခဲ့သော ပစ္စည်းများမှာ ဖွင့်ပွဲနေ့က ဗိုလ်မှူးကြီး တင်လှိုင် ဖွင့်စဉ်မှာသာ ရှိခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် သံအမတ်ကြီးပိုင် သင်္ဃန်းကျွန်းရှိ ခြံတခြံထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ခံလိုက်ရသည်ဟု အတွင်းသတင်းအရ ကြားသိရသည်။ UNHCR ၀န်ထမ်းအရာရှိတဦးဖြစ်သူ (ဦးဇော်မင်း- နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်း) မှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရင်းနှီးသူ သံအမတ်ကြီးဟောင်းနှင့် ပေါင်း၍ လုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံး အဆင်ပြေစေရန် ရုံးစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဘောင်ကို ကျော်လွန်၍ အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု ကြားသိရ၏။
၂၀၀၄ အောက်တိုဘာတွင် အတွင်းရေးမှူး (၁) ခင်ညွန့် ပြုတ်ပြီးမကြာမီ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးတင်လှိုင်ပါ ပြုတ်သွားသောအခါ ထိုမြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီအမည်ခံအဖွဲ့မှာ အလိုလို ပျက်သွားပြီး UNHCR မှ ၎င်းရုံးအတွက် ၀ယ်ယူပေးထားသော တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ (လေအေးပေးစက်တချို့၊ ဆိုနီကင်မရာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ လက်ဖ်တော့) တော်တော်များများမှာ သံအမတ်ကြီးလက်ဝယ်ထံမှ UNHCR က ပြန်လည်တောင်းခံရာ အစရှာမရခဲ့ကြောင်း အတွင်းသတင်းအရ သိရသည်။
Tue 31 Mar 2009, မင်းအာသံ
မုဒုံဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက် မယကမှ မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာဥက္ကဌများကို ၄င်းတို့အတွက် လက်မှတ်အကူရောင်းပေးသည့် ပုံစံဖြင့် ၄င်းတို့သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေးပမာဏအတိုင်း မဖြစ်မနေ ပေးဆောင်ရသည်ဟု ဒေသခံများမှ သိရသည်။
ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ပြုလုပ်မည့် မုဒုံဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက် မုဒုံမယကမှ မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာဥက္ကဌများကို ဘောလုံးလက်မှတ်များပေးပြီး ကျေးရွာများအတွင်းရှိ ရွာသားများကို ရောင်းရန်ဖြစ်သည်။
“ရွာအခြေအနေကို ကြည့်ပြီးတော့ ပေးတယ်၊ အိမ်ခြေ ၄၀၀ - ၅၀၀ လောက်ရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင် တစ်သိန်းခွဲနဲ့ ညီမျှတဲ့ လက်မှတ်အရေအတွက် ကျေးရွာဥက္ကဌကို ပေးလာတယ်။ ဒီထက် ကြီးတဲ့ ရွာဆိုရင်တော့ နှစ်သိန်းခွဲ၊ သုံးသိန်းအထိပေါ့၊ ဒီလိုပေးတယ်၊ သူတို့အတွက် လက်မှတ်ကို ကူရောင်းပေးတဲ့ ပုံစံအနေနဲ့ ပေးတယ်၊ အမှန်တကယ်တော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့လက်မှတ် တစ်သိန်းခွဲဖိုးပေးလာရင် တစ်သိန်းခွဲတောင်းတယ်၊ နှစ်သိန်းခွဲဖိုး ပေးလာရင် နှစ်သိန်းခွဲယူတယ်၊ လက်မှတ်ရောင်းကုန်တာ မကုန်တာသူတို့မသိဘူး” ဟု လက်မှတ်ဝယ်ခဲ့ရသော ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရွာတစ်ရွာ၏ အိမ်ခြေအပေါ် မူတည်၍ လက်မှတ်အစောင်ရေ ၅၀ မှ ၈၀ အထိ ပေးသည်ဟု နှီးပဒေါ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ ကျေးရွာဥက္ကဌသည် မယကမှ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ငွေကြေးရရန် လက်မှတ်များကို ကြိုးစားကာ ရောင်းရသည်ဟု ကျေးရွာဥက္ကဌတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်မှတ်များကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မဝယ်ချင်ကြသောကြောင့် ထိုင်းဖုန်းထောင်သူများ၊ ချဲရောင်းသူများ စသည့် ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် အလုပ်လုပ်သူများကို ဥက္ကဌမှ လိုက်လံရောင်းပေးနေသည်ဟု ဒေသခံရွာသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ကျတော်တို့ အိမ်ကိုငါးစောင်ပေးဝယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၃ စောင်ပဲဝယ်လိုက်တယ်၊ ဝယ်ချင်စိတ် တောင်မရှိဘူး၊ ကြည့်လဲမကြည့်ချင်ဘူး၊ မဝယ်လို့လဲမရဘူး ကျနော်တို့အိမ်မှာ ထိုင်းဖုန်းထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ မဝယ်ရင် တစ်ခုတစ်ခုလုပ်မှာ အရမ်းကြောက်တယ်၊ ကျနော်တို့နည်းတူပဲ ချဲရောင်းတဲ့သူတွေကို ဒီလိုပဲ အတင်းပေးဝယ်ခိုင်းတယ်” ဟု လက်မှတ်ဝယ်ခဲ့ရသော ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရွာသားတစ်ဦး၏ အဆိုအရ “သူတို့ဘာပဲလုပ်လုပ် စာသင်ကျောင်းဆောက်တာကအစ သူတို့ထုတ်ပေးပြီးတော့ ကျန်တာ ရွာသားတွေဆီက ကောက်တယ်”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တပ်မတော် ဖခင်ကြီးဟု ခေါ်ဝေါ်ဂုဏ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရသူ အာဇာနည် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း မျှော်မှန်းခဲ့သည့် “ပြည်သူ့အကျိုးပြု၊ ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်” တပ်မတော်မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူများကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်နေသည့် တပ်မတော်သာ ဖြစ်နေကြောင်း ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇောက မဇ္ဈိမကို ယနေ့ ပြောသည်။
တပ်မတော်သည် အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရမည်ဆိုသည့် လက်ရှိ တပ်မတော် အကြီးအကဲများ၏ အကြံအစည်ကိုလည်း သူက သဘောမတူကြောင်း ပြောဆိုသည်။
မနက်ဖြန်ကျရောက်မည့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့သည် ၆၄ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ ဖြစ်သဖြင့်၊ ယနေ့ခေတ် လူငယ်လူရွယ်များ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံကို တစေ့တစောင်း လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇောထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် သူက ယခုလို ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ ညီညွတ်စွာ လက်တွဲ၍ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား စစ်ကြေညာခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် နေ့တနေ့ဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် အဆက်ဆက်ကမူ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ကို တပ်မတော်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ စစ်အင်အားစု ပြရုပ်အဖြစ် ဆင်ယင်ကျင်းပလေ့ရှိခဲ့သည်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တပ်မတော်ကို မည်သို့သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ထူထောင်ခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော၏ ပြောဆိုချက်များကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို တော်လှန်တဲ့ ရက်ကို မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရပုံ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဒီနေ့ခေတ် လူငယ် လူရွယ်တွေ သိရအောင် ပြန်ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။
ဂျပန်ကိုတော်လှန်ဖို့ ဖွဲ့ထားတဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တော်လှန်ဖို့၊ ရက်သတ်မှတ်ဖို့ တာဝန်ပေးထားလို့ ဗိုလ်ချုပ်က အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်မယ့် ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့၊ ည ၇ နာရီကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အဲဒီအတောအတွင်းမှာပဲ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ တချို့တပ်မှူးတွေက မိမိတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်တွေကို ဟိုပို့ ဒီပို့၊ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့တွေ လုပ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ပဲခူးမြို့ လူထုအတွင်းမှာ ဗမာ့တပ်မတော်က ဂျပန်တွေကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအစအနတွေ ထွက်လာပါတယ်။
အဲဒီသတင်းကို ကျနော်တို့တတွေရတော့ တိုင်း ၄ စစ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ချက်ချင်း ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီသူတွေကတော့ သခင်ချစ်၊ ဗိုလ်သိန်းတင်၊ ဗိုလ်ဗတင်၊ ဗိုလ်အောင်ရွှေ (ယခု NLD ဥက္ကဋ္ဌ) နဲ့ ကျနော်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးက တော်လှန်မယ့်ရက် ဧပြီ ၂ ရက်မတိုင်ခင် သတင်းပေါက်ကြားနိုင်တယ်လို့ ယူဆပြီး၊ သတင်းပေါက်ရင် ဂျပန်က လက်ဦးမှုရသွားရင် ဂျပန်တော်လှန်ရေးကြီး တခုလုံး ထိခိုက်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိကြပါတယ်။
ဒီလို သတင်းပေါက်ကြားရင် ဂျပန်တွေက ဗမာ့တပ်မတော် စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ချက်ချင်း ဖမ်းတာ၊ ဗမာတပ်တွေကို လက်နက်ဖြုတ်တာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာ အရန်တပ်ဖွဲ့ဟာလည်း ရန်ကုန်နားက “အင်းတိုင်” မှာ တပ်စွဲထားလို့ ပဋ္ဌမဆုံးခံရမယ့် ဗမာ့တပ်တွေဟာ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး တဝိုက်က ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
ဒါကြောင့် တော်လှန်မယ့်ရက်ကို ဧပြီ ၂ ရက်ထက် စောပြီး ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ကျန်တပ်ဖွဲ့ အသီးသီးဆီ သတင်းအစောဆုံး ရောက်နိုင်တဲ့ရက် မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ည ၇ နာရီမှာ စတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး စစ်တိုင်း အသီးသီးဆီ ဆက်သားတွေ လွှတ်ပြီး ရက်အပြောင်းအရွှေ့ကို အကြောင်းကြားတာမှာ အားလုံး အချိန်မီ ရောက်သွားကြလို့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးကြီးကို ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့၊ ည ၇ နာရီမှာ တပြည်လုံးမှာ ကျနော်တို့က လက်ဦးမှု ရှိစွာနဲ့ အောင်မြင်စွာ စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့၊ ည ၇ နာရီအချိန်မှာ ကျနော်က ပဲခူးမြို့တွင်းက စစ်ရေးပြကွင်းအတွင်းမှာ တပ်အားလုံး တပ်ထွက်ဖို့ တန်းစီစုဝေးစေပြီး အခုအချိန်ကစလို့ ဗမာပြည်သူများနဲ့ ဗမာ့တပ်မတော် တရပ်လုံးက ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ကြပြီလို့ ကျနော်က ကြေညာပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်အပေါ် စစ်ကြေညာစာတန်းကို ဖတ်ပြပါတယ်။ ပြီးနောက် နဂို ကြိုတင် စီစဉ်ထားတဲ့ နေရာဒေသအသီးသီးကို လူစုခွဲ ချီတက်ကြပါတော့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တပ်မတော်ကို စဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျာ။
၁၃ဝဝ ပြည့် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံကြီးကို နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့က အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲလိုက်ပြီးနောက် အဲဒီခေတ် ဗမာအမျိုးသားနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များအကြား ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးကို လက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်မှ ရတော့မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဗမာအမျိုးသား လက်နက်ကိုင်တပ် ထူထောင်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ် အပါအဝင် ခေါင်းဆောင်များက စဉ်းစားပြီး၊ နိုင်ငံခြား အကူအညီရှာဖို့ ဗိုလ်ချုပ် ပြည်ပသို့ ထွက်ခဲ့တာပါပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တပ်မတော်ကို ထူထောင်စဉ်က ထားခဲ့တဲ့ သဘောထား ၄ ရပ်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ -
၁။ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်တဲ့တပ်မတော်
၂။ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ နေထိုင်ကျင့်ကြံတဲ့ တပ်မတော်
၃။ နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်မစွက်တဲ့ တပ်မတော်နဲ့
၄။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးလိုလားတဲ့ တပ်မတော် ဆိုတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးရင်လည်း နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ခေတ်မီတဲ့ တပ်မတော်တရပ်ကို ထူထောင်နိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တပြည်မှာ တပ်မတော်တရပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးပါသလဲ။ ဘာကြောင့် အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပါသလဲ ခင်ဗျာ။
တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ တပ်မတော်ဟာ ရှိရမှာပါ။ အဲဒီတပ်မတော်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးကို တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးကိုလည်း သည်ပိုးဆောင်ရွက်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်ရပါမယ်။ အထက်မှာ ပြောထားတဲ့ သဘောထား ၄ ရပ်ဟာ ပြည်သူ့တပ်မတော်တရပ်ရဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်လက်အောက်က တပ်မတော်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မျှော်မှန်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နဲ့ တူပါသလား။ ကွာခြားချက် တစုံတရာ ရှိပါသလားခင်ဗျာ။
ဗိုလ်ချုပ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နဲ့ အခု စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကာကွယ်နေတဲ့ တပ်မတော် ဘာကွာခြားသလဲဆိုတာကို တိုတိုနဲ့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပြည်သူတွေပေါ်မှာ ထားတဲ့ သဘောထားမှာ ကွာခြားတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှတို့လက်အောက်က ဗမာပြည်သူတွေ လွတ်မြောက်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင် လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ပြည်သူ့အကျိုးပြု၊ ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် တပ်မတော်ဖြစ်ရေးကို ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးသွားပြီးနောက် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးလည်း ပြိုကွဲသွားတဲ့အောက်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းဟာ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တပ်မတော်ကို ပြည်တွင်းစစ်ထဲ နှစ်မြှုပ်လိုက်ပြီး၊ တပ်ကို တလက်ကိုင် ကြေးစားတပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်ထောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ သူတို့ကတော့ ပြည်သူကို ရန်သူ သဘောထားပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေ၊ လူမျိုးစုဒေသတွေမှာ ရက်စက်ရုံမက အခု မြို့ပေါ်က လူထုတွေကိုရော အခုနောက်ဆုံး သံဃာတော်တွေကိုပါ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နေတာတွေကို တွေ့နေရပါပြီ။ အဲဒီလို ကွာခြားတာပါ။
အနာဂတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်ဟာ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆအပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ခင်ဗျာ။
အနာဂတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်ဟာ ဦးဆောင်မှုအခန်းက ပါဝင်မယ်ဆိုတာကို ကျနော် လုံးဝ သဘောမတူပါဘူး။
ဒါဟာ နအဖ စစ်တပ်က တိုင်းပြည်နဲ့ လူထု ဘာပဲဖြစ်နေနေ မိမိတို့ အာဏာ လက်မလွှတ်ရရေးဘဲ စဉ်းစားပြီး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်အသက်ဆက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒုက္ခအဖုံဖုံဟာ ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာ မြစ်ဖျားခံပါတယ်။ ကျနော်ဟာ တိုင်းပြည်ကို ဒီလောက် ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နည်းသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူပါ။ ဒီစနစ် မကျမဆုံးမချင်း ကျနော် အသက်ရှင်နေသရွေ့ ဆက်တိုက်သွားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ သဘောထားပါ။
ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေး အင်အားစု ရှင်းလင်းချက် (2)
ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေး အင်အားစု ရှင်းလင်းချက် (2) 33koko97
Publish at Scribd or explore others: Reports History Politics
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသကို နာဂစ်ဆိုက် ကလုန်း မုန်တိုင်းက ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး သည့်နောက် တနှစ်ကြာနီးပါး ကာလ တွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများက ကျိုးတိုးကျဲတဲ အခက်အခဲများ နှင့် ရုန်းကန် နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေ သည့် မြန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ပေးရေး အဖွဲ့အစည်း များအကြား "မကြုံစဖူး ထူးကဲသည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ" ရရှိခဲ့ သည် ဆိုသော်လည်း အခြေအနေက ခက်ခဲနေ ဆဲပင် ဖြစ်သည်။
သုံးပွင့်ဆိုင်ဗဟိုအဖွဲ့ (TCG) ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း စစ် အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက ၎င်းကြေညာချက်ကို ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ TCG သုံးပွင့်ဆိုဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ နာဂစ်မုန် တိုင်း ကယ်ဆယ် ရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသည့် ကော်မီတီပင် ဖြစ်သည်။
သုံးပွင့်ဆိုင်ဗဟိုအဖွဲ့တွင် စစ်အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါရှိနေကြပြီး၊ ၎င်းကော်မီတီကို အသက်ဆက်ခွင့်ပေးခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏လုပ်ငန်းများ ထိရောက် စွာမလုပ်ဆောင် နိုင်အောင် စစ်အစိုးရက ထပ်၍ ကန့်သတ်ခဲ့ပြန်သေးသည်။
ပထမပြဿနာက ဖေဖေါ်ဝါရီလဆန်းပိုင်းတွင် စလာခဲ့သည်။ TCG သုံးပွင့်ဆိုင်ဗဟိုအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ယခင် ဒု-နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်သူကို ၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့သို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချခဲ့ကာ အရေးမပါသည့် နေရာသို့ ပို့ခဲ့သည်။
ဤသတင်းကြောင့် နာဂစ်လေလေး ကယ်ဆယ်ကူညီရေး လုပ်သားများအကြား စိုးရိမ်သောက မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ အကြောင်းမှာ ဦးကျော်သူက စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအကြား ထူးထူးခြားခြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ လက်တွေ့ကျသည့် အဖြေများ အတွက် ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ကျယ်ကျယ်ထားနိုင်သူ တဦး ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများ၏ စိုးရိမ်ချက်က ပို၍ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ဦးကျော်သူ စတင်ခွင့်ပြုထားခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ် ရေး တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည့် နိုင်ငံရပ်ခြား ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများကို စောလျှင်စွာ အရေးပေါ် ဗီဇာထုတ်ပေးသည့် အစီ အစဉ်များကို စစ်အစိုးရက ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများ၏ လုပ်သားများအနေနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသကို လွန်ခဲ့သည့်နှစ်မေလ မုန်တိုင်း မတိုက်ခင် အခြေအနေမျိုး၊ ရှုပ်ထွေးပြီး အချိန်အလွန်ကုန်သော ဗီဇာလျှောက်ထားရခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်ဖြတ်သန်း ရတော့မည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ဗီဇာများ တင်းကျပ်လိုက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်ဆယ် ကူညီရေး လုပ်ငန်းများတွင် များစွာ နောက်ဆုတ်သွားရမည်ကို သိသာနိုင်သည်။ တင်းကျပ်ချုပ်ချယ်မှုများကြောင့် မူလ ကတည်းက အခက်အခဲများ စွာကြုံတွေ့နေရသော ဒေသခံကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများအဖို့ ပို၍ ကျပ်တည်းလာဖွယ်ရှိနေ သည်။
ဤအချိန်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနှင့် အကူအညီများ လက်ခံရယူရာ၌ ပို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာ လုပ် ဆောင်ရန်၊ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရန် တောင်းဆိုမှုများ ပို၍ တိုးတက်ကျယ်လောင်လာနေပါသည်။
" မုန်တိုင်းပြီးနောက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှ အသံများ" (After the Storm: Voices from the Delta) ဟု အမည်ပေးထား သည့် အစီရင်ခံစာတွင် အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများကို နှောင့်ယှက်မှုများ၊ အလှူပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမှုများ၊ ကယ်ဆယ် ရေးပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရောင်းချမှု၊ ကယ်ဆယ်ရေးစေတနာဝန်ထမ်းများကို ဖမ်းဆီးမှု၊ လူမျိုးကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေခြင်းနှင့် မြေယာများ သိမ်းပိုက်ခြင်း အပါအ၀င် စစ်အစိုးရ၏ အတောမသတ်နိုင်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင် စုစည်းတင်ပြထားခဲ့သည်။ ၎င်းအစီ ရင်ခံစာကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် ဂျွန် ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ်၊ ဘလူးမ်ဘာ့ဂ် လူထုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာသင်ကျောင်းက ပူးပေါင်းရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်း၊ တွံတေးမြို့နယ်နေ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်မှ ရှင်ကျန်ရသူများ၏ ဆန္ဒပြ တောင်း ဆိုပွဲ ကလည်ုး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စစ်အစိုးရ၏ စွမ်းဆောင်နေမှုများကို မကျေနပ်ဖြစ်နေကြကြောင်း သာဓကတခု ဖြစ်သည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာနေ ဆန္ဒပြသူများက မိုး ရာသီနီးကပ်လာသည့်တိုင် သူတို့တွင် နေထိုင်စရာ အိုးအိမ်မရှိသေးကြောင်း မကျေနပ်ချက်များကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
၎င်းဆန္ဒပြပွဲက သေးငယ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် လေးဖင့်နှေးကွေးနေမှုများ အတွက် များစွာလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြသလိုက်သည့် လက္ခဏာပင် ဖြစ်သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး၍ တနှစ်နီးပါးကြာသည့်တိုင် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးသည့်အပြင် ပို၍ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် သဘာဝဘေး ဒဏ်တခုကို ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ထိရောက်သည့်စနစ်များ မရှိသေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆိုးရွားပြင်းထန်သည့် ဖျက်ဆီးမှုကြီးမားသော မုန်တိုင်းမျိုး နောက်တကြိမ် လာလိမ့်မည်ဟု မည်သူမှ တပ်အပ်မပြော နိုင်ကြပါ။ သို့သော်လည်း စစ်အစိုးရက ၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ထားကြပြီး၊ ပြည်သူအများ သာယာဝပြော ရေးလုပ်ငန်းများကို လျစ်လျူရှုထားကြဆဲပင် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘေးဆိုးနှင့် ထပ်မံကြုံရပါက မလိုလားအပ်ဘဲ လူများ စွာ သေကြေကြရလိမ့်ဦးမည် ဖြစ်သည်ဟု ပြောလျှင် လွန်မည်မထင်လှပါ။
( 33 )နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ် ၃ သိန်းခန့် ရရှိ
( 32 )Fencing on Bangladesh border not "defence structure"
( 31 )ခိုးကူးခံရမည်စိုးသဖြင့် သင်္ကြန်သီချင်း အထွက်နည်း
( 30 )Burmese democracyadaunting task
( 29 )မှောင်ခိုကုန်ကူးမှု တားဆီးရန် သံဆူးကြိုးကာဟုဆို
( 28 )Burma commences fence construction on Bangladesh border
( 27 )'Land of Jade' remains closed to tourists
( 26 )မြန်မာ့ ဒုက္ခသည်မိသားစုတစု ဒက္ကားမြို့ UNHCR ရုံးတွင် ဆန္ဒပြ
( 25 )Jade mining companies forced to mine despite losses
( 24 )Mudon Township TDPC force sale of football match tickets
( 23 )ကချင်ပြည်နယ် အဖွဲ့ချုပ်ပါတီက စည်းရုံးရေး အရှိန်ဟုန်မြင့်မည့် အစည်းအဝေးပွဲပြုလုပ်
( 22 )Chili cultivators in Chin state in dilemma over low exchange rate
( 21 )ရိုဟင်ဂျာများထံမှ ငွေယူပြီး ဘင်္ဂလားသို့ ပို့ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပွား
( 20 )Suu Kyi Climbs Higher in Time Magazine Poll
( 19 )ဖားကန့်ကို နိုင်ငံခြားသား သွားရောက်ခွင့် ပြန်ပိတ်
( 18 )Burma Tells Bangladesh Fence Will Stop Smuggling
( 17 )နာဂစ်သင့်များ ထူထောင်ရေး ငွေလိုဟု သုံးပွင့်ဆိုင်က ပြော
( 16 )More NLD Members Receive Lengthy Prison Sentences
( 15 )Burmese Rock Fans Arrested in Bangkok
( 14 )ဆိုးဆေးပါ လက်ဖက် ၅၇ မျိုး ရောင်းချခွင့် ထပ်မံပိတ်ပင်
( 13 )Bangladesh seeks clarification from Burma on border fence
( 12 )အန်ဂျီအိုများ ကူညီသည့်တိုင် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ရေခက်ခဲ
( 11 )Myanmar national killed in freak road accident
( 10 )12th Convention of Rakhine Buddhist Welfare Association held in Bangladesh
(9)ပါရမီအဲယားကွန်း လေအိတ်ယာဉ်(၁၀၀) ကျော်လေးကားများအဖြစ် ပြောင်းမည်
( 8 )Authorities Employ New Tactic with Labor
(7)နာဂစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အရေးပေါ်အကူအညီ ကုလသမဂ္ဂ တောင်းခံ
(6)The sky is not blue in Burma
(5)Fishermen find killed Briton's body
(4)Going to great lengths for swear words
(3)Bangladesh asks Myanmar to explain its border fencing plan
(2)Myanmar ‘eases tension’ over fencing
( 1 )နယ်စပ် သံဆူးကြိုးကာမှု မြန်မာကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဖြေရှင်းချက်တောင်း
အေးချမ်းမြေ့ Monday, 30 March 2009
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပသော Iron Cross (IC) ပွဲကို လာရောက် ကြည့်ရှု အားပေးသည့် ပရိသတ် ၄၀၀ ကျော်အား ထိုင်း လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာနက ဖမ်းဆီး လိုက်ကြောင်း ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမားအဖွဲ့မှ ကိုအောင်မြင့်သိန်းက ပြောသည်။
အဖမ်းခံရသူများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း တရားမဝင်နေထိုင် အလုပ်လုပ်နေသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ကန်ထရိုက်တွေက လက်မှတ် စရောင်းတုန်းက လုံခြုံရေး တာဝန်ယူတယ်လို့ ပြောလို့ ကျနော်တို့လည်း လက်မှတ် ရောင်းရတာ။ ခု အလုပ်သမား တွေက လက်မှတ်ဖိုး လည်း ဆုံး၊ အဖမ်း လည်း ခံရပြီ”ဟု ကိုအောင်မြင့်သိန်းက ပြောဆိုသည်။
ထိုသတင်းကို ကြားရသောကြောင့် IC ၏ လိဒ်ဂစ်တာသမား ချစ်စမ်းမောင်က အဖမ်းခံရသည့် အလုပ်သမား များအတွက် စိတ်မကောင်း ကြောင်း ပြောသည်။
အဆိုတော် လေးဖြူ၊ အငဲ၊ မျိုးကြီး၊ ဝိုင်ဝိုင်း၊ ဆုန်သင်းပါရ်နှင့် ကြိုးကြာတို့ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ဘ္ဘန်ဘော် ဒေသ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် မတ်လ ၂၉ ရက်ညက IC ရှိုးကို လာရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဘန်ကောက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ် နေကြသော မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အဖမ်းခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
IC ပွဲကျင်းပရာ ငါးသေတ္တာ စက်ရုံသို့ အဝင်လမ်းကြားတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ရဲများက စောင့်ဆိုင်း ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ အဖမ်းခံခဲ့ရသူများ နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့နိုင်ခြေ ရှိသည်ဟု ကိုအောင်မြင့်သိန်းက ပြောပြသည်။
“ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း၂ ယောက် ဒီလာတာ လမ်းစရိတ်ရယ်၊ လက်မှတ်ခရယ် ဆိုရင် ဘတ် ၁၁၀၀ ကျတယ်။ အဝေးကြီးက လာရတာ။ အဖမ်းအဆီးကိုလည်း ရှောင်ရသေးတယ်။ ရောက် တော့ သီချင်း ၂ ပုဒ်ပဲ မီလိုက်တယ်”ဟု မောင်ဝင်းအမည်ရှိ အထည်ချုပ် အလုပ်သမား လူငယ်တဦးက ပြောပြသည်။
အလုပ်သမားများ၏ ပျမ်းမျှ နေ့တွက်ခမှာ တရက်လျှင် ၂၀၃ ဘတ်ဖြစ်သောကြောင့် IC ပွဲကြည့်ရန် ၎င်းတို့၏ လုပ်အားခ ၂ ရက်စာ အကုန်ခံကြရသည်။
ပွဲကျင်းပစဉ် ကြည့်ရှုသူများဘက်က မည်သည့် အနှောင့်အယှက် တစုံတရာမှ မပြုလုပ်သော်လည်း လေးဖြူ သီဆိုအပြီးတွင် ပွဲကိုလာရောက်ရပ်နားခိုင်းသဖြင့် IC ထုံးစံ အတီးသမားများ၏ လက်စွမ်း ပြကွက်များကို ပရိသတ်က မြင်ခွင့်မရလိုက်ပေ။
IC အဖွဲ့စီးလာသည့်ကားကိုလည်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ ရောက်ခါနီးမှ တားမြစ် ထားသောကြောင့် ပွဲကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားသည့် ၇ နာရီအချိန်တွင် မကျင်းပနိုင်ဘဲ ည ၈ နာရီကျော်မှ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း IC ဘေ့စ် ဂစ်တာသမား ကိုခင်မောင်သန့်က ပြောပြသည်။
“ကျနော်တို့ကို သူတို့က တီးဝိုင်းအဖွဲ့မှန်းလည်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပတ်စ်ပို့တွေ ခဏပေးပါဆိုပြီး အကြာကြီးပဲညှိနေတာနဲ့ ပွဲကိုစမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ မစရဘူး” ဟု သူက်ပြောသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ IC အဖွဲ့၏ ပတ်စ်ပို့စ်များတွင် ဖျော်ဖြေရေး ဗီဇာမပါသောကြောင့်ဟုလည်း သိရသည်။ နာရီဝက်ကျော် ညှိနှိုင်းခဲ့ရပြီးမှ ပွဲစခွင့်ပြုခဲ့သည်။
IC ပွဲကို စီစဉ်သူများထဲတွင် ထိုင်းလူမျိုးနှင့် ဗမာများပါဝင်ပြီး ယခုပွဲကို ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အစီအစဉ်ဟု ကြေညာထားသည်။ ရသည့်ငွေကို ၎င်းဒေသရှိ ဝပ်ဘာနမ်ဖု ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းသို့ လှူဒါန်းမည်ဟုလည်း သတင်းရရှိသည်။
ယခု IC ပွဲကို ကြည့်ရှုလိုပါက လက်မှတ်တစောင်ကို ဘတ် ၄၀၀ နှင့်ရောင်းချပြီး ကင်မရာယူ ဆောင်ပါက ဘတ် ၃၀၀ အခွန်ဆောင်ရသည်။ ဗီဒီယိုကင်မရာကို ယူဆောင်ခွင့်လုံးဝမပေးပေ။
ကန်ထရိုက်များနှင့် နီးစပ်သူတဦး က “ငါးသေတ္တာစက်ရုံပိုင်ရှင်က မြေနေရာငှားတယ်။ သူက ရပ်ကွက်လူကြီး အဆင့်လောက်ရှိတယ်။ ကန်ထရိုက်တွေက ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဆိုပြီး နာမည်သာတပ်တာ။ တကယ်က ပိုက်ဆံရှိလို့ ထလုပ်တဲ့သူတွေ။ ဘာအဖွဲ့အစည်းမှ မဟုတ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
IC ပွဲကိုလာကြည့်သူ ပရိသတ်မှာ ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး အများသောအားဖြင့် စက်ရုံ အလုပ်ရုံ များတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများဖြစ်ကြသည်။ ဘန်ကောက်မြို့ ထဲရှိ အေပက် တက္ကသိုလ်တွင်တက်ရောက်နေသော မြန်မာကျောင်းသူ ကျောင်းသား အယောက် ၃၀ ကျော်ခန့်လည်း လာရောက်အားပေးကြသည်။
IC အနေနှင့် ဘန်ကောက်တွင် ကျင်းပခြင်းမှာ ယခုတကြိမ်သည် ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် တွင်ပင်စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
Mon 30 Mar 2009, မိကျလွန်းထော
မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် မုဒုံမြို့နယ် ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများနှင့် အစိုးရ စာသင်ကျောင်း များတွင် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာများ လှုဒါန်းခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးတို့သည် မုဒုံမြို့နယ် နှီးဗဒေါကျေးရွာ အစိုးရအလယ်တန်းကျောင်းတွင် အခမ်းအနားကျင်းပပြီး ၄င်းအခမ်းအနားတွင် နှီးဗဒေါရွာ၊ အဘစ်ရွာ၊ ယောင်ဒေါင်းရွာနှင့် ကွမ်လှာရွာမှ ရွာသူရွာသားပေါင်း ၇၀၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၄င်းအခမ်းအနားတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် ဆိုလာပြား ၃ စုံနှင့် အစိုးရစာသင်ကျောင်းများကို ကြည့်ရှုလေ့လာပြီး လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း လာရောက်လှူဒါန်းဦးမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် ပြောကြားသွားသည်ကို အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သူ အဘစ်ရွာသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
၄င်းအပြင် ကမာဝက်ကျေးရွာတွင်လည်း ခြသေ့င်္ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဓါတ်တော်ကျောင်းနှင့် လွီမာန်ထောကျောင်းတို့တွင် တစ်ကျောင်းလျှင် ဆိုလာပြားတစ်စုံ၊ ငွေကျပ် ၁ သိန်းနှင့် သင်္ကန်းများကိုလည်း လှုဒါန်းသွားခဲ့သည်ဟု ဆရာတော်ဘုရားတစ်ဦးထံမှ ကြားသိရသည်။
၄င်းအစိုးရအဖွဲ့မှ လာရောက်လှုဒါန်းသည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာသားများနှင့် မွန်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တို့က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု ဝေဖန် ပြောဆိုနေကြသည်။
“မြန်မာစစ်အစိုးရတွေက သူတို့ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အလုပ်မစခင်ကတည်းက ပြည်သူတွေ သူတို့အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိအောင် အရင်ဦးဆုံးလုပ်တယ်၊ သူတို့ကို ထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားနေတယ်” ဟု ကွမ်လှာ ရွာသားတစ်ဦးကပြောသည်။
မွန်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှုး ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းက “ ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် အခုလို လှူဒါန်းတာက လူထုတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို လိုချင်လို့၊ သူက မုဒုံမြို့နယ်ဘက်မှာ အမတ်လောင်းအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း ကြားနေရတယ်” ဟု ပြောသည်။
အချို့သော ပြည်သူပြည်သားများကလည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် လာရောက်လှုဒါန်းနေသည်ဟုလည်း ပြောနေကြသည်။
“ကျနော်တို့ရွာမှာ မူလတန်းကျောင်း ၃ ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၁ ကျောင်းရှိတယ်။ သူပြောတာတော့ လာလှူမယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ၊ ဘယ်တော့လာဦးမယ်လို့တော့ မသိသေးဘူး၊ သူတို့က နှစ်တိုင်းတော့ လာလေ့ရှိပါတယ်” ဟု နှီးဗဒေါကျေးရွာမှ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းပြောပြချက်အရ “လာမယ့် ဇွန်လ အတာသင်္ကြန်ပြီးရင် စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံး ကော်မရှင်ဖွင့်ခွင့်ရမယ်၊ အခုလောလောဆယ်တော့ စစ်အစိုးရတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းတွေမှာ လှူဒါန်းတာလောက်ပါပဲ၊ စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့ပုံစံတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
အေးလဲ့ Monday, 30 March 2009
ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးမြို့ ဆံတော်လေး ဘုရားအနီးတဝိုက် သာသနာ့ နယ်မြေအတွင်း ဟိုတည် တခု ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံဃာတော် တချို့က ယမန်နေ့မှ စပြီး ပဌာန်း ရွှတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ခြင်း ဖြင့် ကန့်ကွက် ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ“ပုဂံ ဧရာ ”ဟိုတည်ရှိ နှိုက်ကလပ်ခန်းမ၊ တည်းခိုခန်း၊ ကာရာအိုကေခန်း၊ စားသောက်ခန်း ၊ ဘားခန်း စသည်များမှာ ဘာသာသာသနာနှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အတွက် ၎င်းဆံတော်လေး ဘုန်ကြီးကျောင်းမှ သံဃာ တော် အပါး၂၀ ခန့်က သာသနာ့အလံစိုက်ထူကာ ၄ ရက်ခန့် ပဌာန်းရွှတ်ဖတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း တွံတေးမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ)ဥက္ကဌ ဦးကြင်တိုးက ပြောသည်။
“မြို့နယ် အာဏာပိုင်တွေကလည်း ဘာမှ အရေးယူ မပေးနိုင်ဘူး၊ ဒီဟိုတည် ပိုင်ရှင်နဲ့ ပါလာတဲ့ အာဏာပိုင် တွေက ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ အရာရှိတွေပါလာတော့ အရေး မယူပေး ရဲဘူး၊ ဒါကို ဘုရားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နေရာဖြစ်တော့ တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒေသခံတချို့ကလည်း မကျေနပ် ကြဘူးပေါ့” ဟု လည်း ဦးကြင်တိုးက ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး“ဆံတော်လေး ဘုန်းကြီးကျောင်းက သံဃာတော်တွေက မကောင်းတာတွေ ထွက်သွား အောင်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပဌာန်းရွှတ်ဖတ်တာ၊ သာသနာပိုင် နယ်မြေတွေမှာ မကောင်းတဲ့ အဆောက်အဦး မဆောက်စေချင်ဘူး”ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
ဟိုတည် အဆောက်အဦး ဆောက်နေစဉ်ကာလ အတွင်း ထိုသံဃာတော်များက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် များထံစာတင် အကြောင်းကြားသော်လည်း အရေးယူခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုဟိုတည်ကို ပြီးခဲ့သည့် ၂၇ ရက်နေ့ က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ ယင်း ဆံတော်လေး ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းတဝိုက်တွင် ရဲ၊ စစ်တပ်နှင့် ကြံ့ဖွံ့ အဖွဲ့ ၀င်များ က စစ်ဆေး တင်းကျပ်မှုများ ပြုလုပ်ကာ လုံခြုံရေးယူထားသည်ဟု သိရသည်။
ဒေသခံတဦးကလည်း“ဘုန်းကြီးကျောင်း အဝင်၊ အထွက် လူတဦးခြင်းစစ်ဆေးနေတယ်၊ ဖြတ်သန်း သွားလာ ခွင့် မပြု ဆိုပြီးလည်း စာရေးထားတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်း ပုဂံဧရာ ဟိုတည်ကို ကျပ် ငွေ သိန်း ၈၀၀၀ ခန့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံ၍ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြသူများကြောင့် ထိုင်းကက်ဘိနက်စည်းဝေးမည့်နေရာ ရှာနေရ
သတင်းထောက် ဟန်တင်အောင် / မတ်လ(၃၀) ရက်၊ ၂၀၀၉
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအား ထောက်ခံသူများက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကို ယနေ့ တနင်္လာနေ့ထိ (၄) ရက်မြောက် ၀ိုင်းထားသည့်အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးလုပ်ရန် အရေးပေါ် နေရာ ရှာဖွေနေရသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအား ၀ိုင်းထားသည့် ဆန္ဒပြသူများအား တပ်ဆင်က အမည်မသိနိုင်ငံမှ ညတိုင်း ဗီဒီယိုအဆက် အသွယ်ဖြင့် တရားဟောနေသည့်အတွက် ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ပိုပြီး စိတ်ပူစရာ ဖြစ်လာသော်လည်း ဆန္ဒပြသူ အရေအတွက်မှာ ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့ညထက် များစွာလျော့နည်းသွားသည်။
တပ်ဆင်အား ၂၀၀၆ ခုနှစ်က အာဏာသိမ်းသည့်ကိစ္စတွင် ထိုင်းဘုရင်၏ နန်းတွင်းရေးရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရမ်တင်ဆူလာနွန်ဒါ ဦးဆောင်ကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒပြသူများအား သောကြာနေ့ည တရားဟောသည့် ထဲတွင် တပ်ဆင်ပြောသည့်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရမ်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ပရမ်ထောက်ခံသူများက တပ်ဆင်နှင့် အနီဝတ်ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်များအား ထိုင်းအစိုးရက အရေးမယူလျှင် ၎င်းတို့နည်း ၎င်းတို့ဟန်ဖြင့် ဖြေရှင်းလက်တုံ့ပြန်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ထားသည်။
စနေနေ့ည တရားဟောသည့်အချိန်တွင်မူ တတိုင်းပြည်လုံး ဆန္ဒပြရန် တပ်ဆင်က နှိုးဆော်ခဲ့သည်။
ဆန္ဒပြသူများကို ဘန်ကောက်ပညာတတ်များ အားမပေး
ထူးခြားသည့်အချက်မှာ မနှစ်က ပီအေဒီဆန္ဒပြသူများ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးသိမ်းထားစဉ်က ဘန်ကောက်ရှိ ပညာတတ် လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးက ၀င်ရောက်ကူညီဆန္ဒပြကြသော်လည်း အနီဝတ်သူများဆန္ဒပြချိန်တွင် တက္ကသိုလ်များ၊ ဆရာဝန်များ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများက ကူညီသည်ကို မတွေ့ရပေ။ ဆန္ဒပြနေသည့် အနီဝတ်အများစုမှာ အထက်ပိုင်းပြည်နယ်များမှ ခေါ်လာသူများဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်နေ လူထု ပူးပေါင်းမှုနည်းပါး သည့်အတွက် ဆန္ဒပြမှု တာရှည်မခံနိုင်ဟု ထိုင်းစာနယ်ဇင်းအချို့က သုံးသပ်သည်။
(၄) ရက်ဆက်တိုက် ဆန္ဒပြခဲ့သော်လည်း အာဘီဆစ်အစိုးရ နုတ်ထွက်ပေးရအောင် ဖိအားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဟု ထိုင်းမီဒီယာအချို့က သုံးသပ်သည်။ ဆန္ဒပြသူအရေအတွက် ထိုးကျသွားခြင်းသည် ရာသီဥတုပူပြင်းလွန်းသည့် အချက်လည်းပါသည်ဟု ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် ပိုင်းက ပြောသည်။
ယခုတကြိမ် အနီဝတ်ဆန္ဒပြသူအတော်များများ တပ်ဆင်၏ ဓာတ်ပုံကို ဆွဲပြားလုပ်ပြီး လည်တွင် ဆွဲထားကြသည် ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ တပ်ဆင်ပုံပါ လည်ဆွဲတခုကို ဘတ် (၃၀) ဖြင့် ရောင်းနေသည်။
အနီဝတ်ဆန္ဒပြသူများအား အစားအသောက် အခမဲ့ကြွေးသည့်တိုင် အ၀ါဝတ်သူများ ဆန္ဒပြချိန်တွင် ဘန်ကောက်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများက အစားအသောက် ရက်ရက်ရောရာ လှူဒါန်းခဲ့မှုကို မမီပေ။
ထူးခြားသည့်အချက်မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဆန္ဒပြပွဲတွင် လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ဖွဲ့ဆိုထားသည့် နိုင်ငံရေးသီချင်းစီဒီခွေ အမြောက်အမြားကို ချရောင်းနေကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ လူကြိုက်များသည့် သီချင်းတပုဒ်မှာ နာမည်ကြီး ထိုင်းအဆိုတော် နိုင်ယင်းယုံအိုးဖားခွန်း၏ အုံပီယမ်ဆိုသည့် သီချင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရ သိမ်မွေ့နူးညံ့သည့်နိုင်ငံအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ယခုထိုအချက်များ ပျောက်ကွယ်ပြီး အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပျက်သွားသည်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းကြရန် ရေးဖွဲ့ထားသည့် သီချင်းဖြစ်သည်။
ယခုတေး သီဆိုသူ၏အမည်မှာ နိုင်ယင်းယုံအိုးဖားခွန်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ သက်တမ်းရှည် နာမည်ကြီး ခါလာဘောင် တီးဝိုင်း၏ တေးဆိုနှင့် တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသီချင်းများနှင့် ဘ၀သရုပ်ဖော်သီချင်းများကို အဓိက သီဆိုတင်ဆက်သူအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
၎င်း၏သီချင်းများသည် လူကြီးလူငယ်အရွယ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးကြသည့် သီချင်းများဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုသီဆိုသည့် သီချင်း၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ကို ဂုဏ်ပြုစပ်ဆိုသည့် သီချင်း၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း (SSA-South) နှင့်ပတ်သက်သည့် သီချင်းများကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဂုဏ်ပြုသီဆိုခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ကြည်ဝေ Monday, 30 March 2009
အလယ် ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် အခြေစိုက်ရာ မန္တလေးမြို့ နန်းတွင်း၌ ယမန်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၀န်းကျင်ခန့်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ နန်းတွင်း အတွင်း ထောက်ပို့တပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးတပ် စသဖြင့် တပ်များ ရှိနေပြီး စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း တချို့ကို မြေနေရာ ၊ အဆောက်အဦး စသည်တို့ကို အခကြေး ငွေယူကာ ငှားရမ်းထားကြ ကြောင်း၊ ယခု မီးလောင်မှု မှာလည်း ဆက်သွယ်ရေးတပ်မှ ငှားရမ်းထားသော စက်ရုံတရုံမှ စတင်လောင် ကျွမ်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံ တဦးက ပြောဆိုသည်။
“အဲဒီထဲမှာ တပ်တွေကလည်း အများကြီး ရှိတယ်၊ သူတို့ ငှားထား တဲ့စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ လည်း အများကြီးပဲ၊ အခု လောင်တာက ဆက်သွယ်ရေး တပ်ထဲကလို့ ကြားတယ်”ဟု သူက ပြောသည်။
တခြားသော မန္တလေး ဒေသခံတဦး ကလည်း“မီး ဘယ်လောက်များ လည်းဆိုတာ တော့ ကျနော်တို့က နန်းတွင်းကို ၀င်လို့မရ လို့မသိ ရဘူး၊ မီးခိုးလုံး ထွက်တဲ့ အပေါ်မှာ ကြည့်ရတာ ကတော့ မိနစ် ၂၀ လောက်တော့ ကြာတယ်၊ ည နေ ၅ နာရီခွဲ ကျော်ကျော်လောက်က ဖြစ်တာ၊ မီးက သိပ်ကြီးကြီး မားမား လောင်တာတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်” ဟု ပြောပြသည်။
မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေစဉ်အချိန်မှစတင်ပြီး မန္တလေးမြို့ရှိ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းလိုင်းများနှင့် လိုင်းဖုန်းတချို့ကို ယနေ့ နံနက် ၆နာရီအထိ ဖြတ်တောက်ထားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးမြို့မှ သတင်းထောက်တဦးက ပြောသည်။
“မီးလောင်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းတွေ ဘယ်လိုမှဆက်လို့မရတော့ဘူး၊ လိုင်းဖုန်းတချို့ရောပဲ၊ ကျနော်တို့တိုက်က လူတွေကို လှမ်းခေါ်တာတောင် မရတော့ဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ မီးလောင်သည့် သတင်းကို လူအများမသိရန် အာဏာပိုင်များက ကြိုးစားခဲ့ ဟန်တူကြောင်း ၊ မီးစတင် လောင်ကျွမ်း သည်ကို မသိရဘဲမီးခိုးကြီးများတက်လာသည့်အချိန်မှ သိရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံ များက ပြောသည်။
“အလိပ်လိပ်တက်လာတဲ့ မီးခိုးတွေကို မြင်တော့မှ နန်းတွင်းထဲမှာမီးလောင်နေပြီဆိုတာကို သိရတယ်၊ ကျနော့်် အသိမီး သတ်ဗိုလ် တယောက်ပြော တာတော့သူတို့ကိုတောင် တော်တော်နဲ့အကြောင်း မကြားဘူး၊ ၀င်ခွင့်လည်း မပေးလို့စောင့်နေရတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု အထက်ပါ သတင်းထောက်က ဆိုသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေစဉ်အချိန်အတွင်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြသော လူပရိသတ်မှာ ကျုံးဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် ပြည့်လျက်ရှိသော ကြောင့် ယာဉ်ထိန်း ရဲများနှင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လူစုခွဲခိုင်းခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“လာကြည့်တဲ့သူတွေက တော်တော်များတယ်၊ ကျုံးဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ အပြည့်ပဲ၊လူတွေကို ပထမတော့ မော် တော်ပီကယ်တွေက လူစုခွဲခိုင်းတယ်နောက်တော့ ရဲတွေပါရောက်လာပြီး လူစု ခွဲခိုင်းမှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူစု ကွဲ သွားတယ်”ဟု မီးလောင်မှုကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူတဦးက ဆိုသည်။
တနင်္လာနေ့၊ 30 မတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ရှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) နမ့်ခမ်းမြို့တွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ (၁၅) မိုင်မှမိုင် (၄ဝ) နှုန်းအထိ ပြင်းအားရှိ လေပြင်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် တိုက်ခတ်လာ နိုင်ကြောင်း မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် အချို့၌ သတိပေး လျှက်ရှိသည်။
အဆိုပါ လေပြင်းသည် မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ (ဝဝးဝဝ) နာရီအချိန်မှ (၃ဝ)ရက်နေ့ (ဝ၆းဝဝ)နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ် တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း မတ်လ (၂၉) ရက် နံနက်စောစောပိုင်းတွင် မိုခမ်းရပ်ကွက်အတွင်း ရပ်ကွက်အာဏာပိုင် များက အသံချဲ့စက်ဖြင့်သတိပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါဒေသခံများက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောသည်။
ယခုလို လေပြင်းကျရောက်မည့် သတင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်ရှိ အခြားရပ်ကွက်တော်တော်များများ၌ မူ အများပြည်သူ သိရှိစေရန် အာဏာပိုင်များက သတိပေးပြောကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
သို့သော်မြို့ပေါ်ရှိ ဒေသခံများအနေဖြင့် လေပြင်းတိုက်လာနိုင်သည့် သတင်းကို လူထုကြား တဆင့်တဆင့်ပြော စကားများကြောင့် သိရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နမ့်ခမ်းမြို့ခံတစ်ဦးကပြောသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နှင့် နယ်မြေချင်းထိစပ်လျှက်ရှိသည့် မူဆယ်အပါအဝင် တရုတ်ဘက်ခြမ်းရွှေလီမြို့ခံများကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာတွင် ဥတုသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အာဏာပိုင်များက တစ်စုံတစ်ရာ ပြောကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း အဆိုပါ ဒေသခံများက ပြောသည်။
ယခုသတင်းရေးနေချိန် မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၁းဝဝ) ချိန်အတွင်း၌ မူဆယ် နမ့်ခမ်း ဂျယ်ဂေါင် အနီးတဝိုက်ရှိဥတုအနေအထားမှာ တိမ်တိုက်များဖြစ်ထွန်းလျှက်ရှိပြီး မိုးအုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနှင့် နေသာလိုက် မိုးအုံ့လိုက် ဖြစ်ပေါ် လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြို့ရောတောပါ လွမ်းခြုံလာသည့် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ရွေလီ-ဂျယ်ဂေါင် ဈေးကွက်များ အတွင်း မြန်မာပြည် အတွက် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်း မျိုးစုံ ရောင်းချ ပေးနေ သည့် ဆိုင်ကြီးများ အား စိတ်ဝင်စား သူတိုင်း ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။
ဈေးကွက်အတွင်း လမ်းသွားလမ်းလာများ လွယ်လင့်တကူမြင်တွေ့ နိုင်စေရန် လူစည်ကားရာလမ်းမကြီး ဘေးတ လျှောက်တွင် ဆိုင်ကြီးတချို့ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ဆိုင်းဘုတ်များကိုလည်း ဗမာဘာသာဖြင့်ပင် “ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းမျိုးစုံရရှိသည် ” ဟု ရေးသားချိတ်ဆွဲထားသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။
ဒါကတော့ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခံထားရသည့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ရောင်းချပေးနေသည့် တရုတ်ဈေးကွက်အတွင်းက အရောင်းဆိုင်ကြီးတချို့ရဲ့ မြင်ကွင်းအစပါ ။
ဆိုင်အတွင်းဝင်ကြည့်လိုက်လျှင် ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဖုန်းများ စစ်မြေပြင်သုံး ဆက်သွယ်ရေးစက် အမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှ အစ လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်အဆုံး ဆိုင်တင်ရောင်းချနေတာ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး လွပ်လပ်စွာဝယ်ယူ ရရှိနိူင်ပါသည်။ ဒီလိုဆိုင်များက တရုတ်စီးပွားရေး သိသိသာသာ ဖွံ့ဖြိုးလာမှုနောက်မှ ထပ်ချပ် မကွာ လိုက်ပါလာတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကမှ ဒီလိုအရောင်း ဆိုင်တွေ စတင်လာခဲ့တာလို့ သိရှိသူများက ဆိုသည်။
ယခုအခါမှာတော့ နေရာအနှံ့က တရုတ်ဖုန်းဆိုင်တွေမှာ မြန်မာပြည်သူများ အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းများ ကော့တလက် ဖုန်းများအား အလွယ်တကူ ရောင်းချလျှက်ရှိသည်။ တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများကို ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြသဖြင့် ဖုန်းအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းလည်း လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်ခန့် ကာလများဆီက တစ်စခန်းထ ခေတ်စားလာခဲ့ပါသည်။
တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများအား မြန်မာပြည်ဈေးကွက်များအတွင်း အရောင်းအဝယ်လုပ်ခဲ့ဘူးသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက လွန်ခဲ့သည့် (၄)နှစ်လောက်က သူမရဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ခဲ့ပုံ အတွေ့အကြုံထဲက အနည်းငယ်ကိုသာ အခုလို ပြောပြသည်။
“ဆိုင်နဲ့ခင်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ ဟိုမှာအရင် ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဖုန်းရချင်တဲ့သူတွေကို လိုက်စပ်ပြီး ဒီကနေ သယ်ရောင်းတာပေါ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိတဲ့ အရောင်းအဝယ်သမားတွေ ကုန်သယ်တွေက ဝယ်သုံးကြ တာပေါ့”လို့ ပြောသည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက အမြဲလိုလိုဈေးကွက် အခြေအနေ ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းပြီး လိုအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရည်အတွက်ကို မှာယူတင်သွင်းနေရတာ ကြောင့် ဆက် သွယ်ရေး၏ အရေးပါမှုသည် တန်ဘိုးဖြတ်၍မရကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသဘောပေါက်ကြသည်။
အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသည့် နှစ်နိုင်ငံ ငွေလဲလှယ်နူန်းထားများ ဈေးကွက်အတွင်း ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေ များကို အချိန်မှီသိရှိမှသာ အမြတ်အစွန်းထွက်ဖို့သေချာမှာမို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ကြောင့် တတ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုကြရသည်။
လွန်ခဲ့သည့်(၁ဝ)နှစ်ဝန်းကျင်ကာလက မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ဖုန်းများ ယခုအချိန်ကဲ့သို့ တွင်ကျယ် စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
တရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှ မြန်မာပြည်အတွင်းပိုင်းသို့ ဖုန်းဆက်သွယ် ခေါ်ဆိုမည်ဆိုလျှင် တရုတ်ဖုန်း နှင့်မြန်မာဖုန်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ထက်ဝက်မျှနှင့် ညီမျှသော တရုတ်ယွမ်ငွေ ကို ပေးဆောင်ကြရသဖြင့် ကုန်သယ်များ၏ ငြီးတွားသံကိုလည်း မကြာခဏကြားကြရသည်။
နောက်ပိုင်း အချိန်များတွင်တော့ အဆိုပါ အခက်အခဲကို ကျော်လွားနိုင်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ဗမာဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများနှင့်ပေါင်း၍ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် ကြံဆတီထွင်လာခဲ့ပုံကို ကုန်သယ်တစ်ဦးက အခုလိုပြန်ပြောင်းပြောသည် ။
“နယ်စပ်မြို့တွေပေါ့ ဒီမှာဆိုမူဆယ်လိုနေရာမျိုးမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှာ ငွေသွင်းပြီး ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု သွားမှတ်ပုံတင်ထားရတယ် အဲဒီအချိန်ကတော့ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၅သောင်းလောက်ကျတယ် ဒီဖုန်းနံပါတ်ရလာပြီ ဆိုရင် ကိုယ်ကတရုတ်ဖုန်းနဲ့အဲဒီနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ရုံပဲ ပြီးကျမှ ကိုယ်ဘယ်မြို့ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် သူတို့က အိတ်ချိန်းကနေလွဲပေးလိုက်တယ် အဲလိုပြောကြရတယ် ဒီနံပါတ်က ကိုယ့်နံမယ်နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် တခြား လူခေါ်လို့မရဘူး တခြားလူခေါ်တယ်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ လူနံမယ်ကိုပြောပြနိူင်မှရတယ် ဗမာပြည်ထဲက ဆက်ချင်ရင်လည်း အဲဒီနံပါတ်ကိုခေါ် ဘယ်တရုတ်ဖုန်းကိုချိတ်ပေးပါဆို သူတို့ကချိတ်ပေးလိုက်တာပဲ ” လို့တချိန် က တရုတ်နယ်စပ်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကို ကုန်သယ်က ရှင်းပြသည် ။
ယခုလိုကြားခံပြီး ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုများ ထွန်းကားလာသဖြင့် ဖုန်းပြောခဈေးနူန်းလည်း တစ်မိနစ်လျှင် မြန်မာ ငွေကျပ် (၅ဝဝ) သာပေးရ၍ ထက်ဝက်ခန့်သက်သာသွားသည်ဟု ဆိုသည် ။
ယခုတော့ နယ်စပ်ဆက်သွယ်ရေးလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီဟု ဆိုနိူင်မလားမသိပါ ။ တရုတ်ဘက်ခြမ်းရှိ နယ်စပ်တစ်လျှောက် ကုန်သွယ်ရေးထွန်းကားရာ မြို့ကြီးများတွင် မြန်မာIP Star အဝေးပြောဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းရုံများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိလာကြသည် ။
လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကလည်း ကိုယ်ပိုင်ဈေးဆိုင်လေးများတွင် အခကြေးငွေယူ၍ ပြည်တွင်းသို့ ဆက်သွယ်နိူင်သည့် ဗမာဖုန်းများထားရှိကာ ဆက်သွယ်ရေးစီးပွားနယ်ပယ်အတွင်းသို့ တိုးဝင်လုပ်ကိုင်လာကြသည် ။
ဗမာဖုန်းတစ်လုံးကို ကျပ်သိန်း(၂ဝ)ကျော်ခန့်ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး ကိုယ်ပိုင်ဈေးဆိုင်လေးတွင် အခကြေးငွေယူ ဝင်ငွေရှာ သူများရှိလာသည် ။
ဗမာဖုန်းအချင်းချင်း ဆက်သွယ် ပြောဆိုကြရသည့် ဖုန်းဆိုင်များတွင် တစ်မိနစ်ဖုန်းပြောခ တရုတ်ငွေ (၁) ယွမ်နူန်း သာကုန်ကျသော်လည်း အသံကောင်းမွန်စွာမကြားရသည့် ဒုက္ခက မသေးလှဟု မိဘများထံ ပုံမှန်ဖုန်းပြောလေ့ရှိ သည့် မြေလပ်ပိုင်းမှ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ပြောဆိုကြသည့် နှစ်ဘက်စလုံးသည် အသံရှင်းလင်းမှု မရှိသဖြင့် ရန်ဖြစ်သလိုအော်နေကြရပြီး လမ်းသွားလမ်း လာ တရုတ်များကပင် အထူးတဆန်းလှည့်ကြည့်နေကြသဖြင့် ဗမာဖုန်းပြောရတာ ရှက်စရာကောင်းကြောင်း ပြောသည်။
ယခုအချိန်တွင် ယခင်ကလောက် အခြေအနေ သိပ်မဆိုးတော့ပေမဲ့ အသံကတော့ တိုးနေမြဲဟု ပြောသည် ။
ဗမာ GSM ဖုန်း ကိုယ်ပိုင်သုံးလုံးပိုင်ဆိုင်သည့် မူဆယ်က ကုန်သယ်ကြီးတစ်ဦးကတော့ တစ်ခါသုံး SIM ကဒ်များ ရောင်းချပြီးသည့် နောက်ပိုင်း အခြေအနေပိုဆိုးလာသည်ဟု ဆိုသည်။ ပြည်တွင်းဖုန်းများမှာလည်း ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုတည်းကို လှိုင်းခွဲ ၃ ခုခန့်ခွဲကိုင်ထားသဖြင့် အသံမှာ နားထောင်လို့မရအောင်ပင်ဖြစ် နေကြောင်း သူက ပြောပြသည်။
တရုတ်ဖုန်းများကတော့ အိမ်အတွင်းထိုင်ရာမထ အသံအုပ်အုပ်ဖြင့်ပင် ပြောနိုင်သဖြင့် ဖုန်းအော်ပြောသည်ကို တရုတ်များက အခုလို အထူးအဆန်း လုပ်ကြည့်ကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပုံပေါ်သည်။ ဗမာဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ကုန်ကျ သည့် ငွေကြေးပမာဏက ဗမာပြည်တွင်းတွင်ပြောနိုင်သည့် တရုတ်ဖုန်းအလုံး ၂ဝ ကျော်ကို ဝယ်ယူရနိူင်သည် အထိ ဈေးနူန်း ကွာခြားပြီး လွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိူင်မှုတွင်လည်း အတိုင်းအဆ မသိကွာခြားနေသည်။
တရုတ်နှင့်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် နီးနီးကပ်ကပ်လုပ်ကိုင်လာကြသဖြင့် ပြည်တွင်း မှ ကုန်သယ်များသာမက ဗမာစစ်အာဏာပိုင်များကပါ ငွေလဲနူန်းနှင့်အရောင်းအဝယ် ကိစ္စများကို မေးမြန်းနေကြရာ တွင် တရုတ်ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ကြကြောင်း တရုတ်နယ်စပ်ကျန်းဖုန်းမှ မြန်မာကုန်သယ်က ပြောသည်။
ဗမာစစ်အာဏာပိုင်ဝန်ထမ်းများနယ်စပ်မြို့များသို့ ပြောင်းရွေ့ခါစတွင်ဆယ်လူလာဖုန်းအားမမြင်ဘူးသည့် ဝန်ထမ်း များပင် ရှိသော်လည်း ရက်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်း တရုတ်ဆယ်လူလာဖုန်းတစ်လုံး ကိုင်ဆောင်လာနိူင်ကြ
ကြောင်း ဝန်ထမ်းလောကနှင့်နီးစပ်သူက တရုတ်ဖုန်းပေါများနေသည့်အကြောင်းကို စပ်မိ၍ ပြောပြဘူးသည်။
တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များက မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနေရာများတွင် လူကိုယ်တိုင်သွားရောက် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူ ခြင်း ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု့များပြုလုပ်ကြခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များလုပ်ကြခြင်း တို့ကြောင့် တရုတ်မိုဘိုင်း ဖုန်းဆက်သွယ် ရေး အခန်းကဏ္ဍက ပို၍အရေးပါနေရာယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များက မြန်မာပြည် (မြောက်ပိုင်း) တွင် ဖါးကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းများ ရွေတူးဖေါ် ရေး လုပ်ငန်းဂွင်များ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသာမက ဗမာစစ်တပ်နှင့် စစ်အစိုးရရုံးဌာန ဝန်ထမ်းများ ကိုပါ ပိုက်ကွန် သဖွယ် ယှက်နွယ်လွမ်းခြုံထားလိုက်တော့သည်။
ယခင်က ရွာငယ်ဇနပုဒ်ဟု ခေါ်ဆိုကြရသည့် ရွေစက်တော်သွားတောလားဘွဲ့ပါ ကဗျာစာသားများအတိုင်း တော အထပ်ထပ် ချောင်းအသွယ်သွယ် ဖြတ်သန်း ခရီးဆက်ခါမှ ရောက်ရှိရသည့် ရွာသိမ်ရွာငယ်လေးများတွင်ပင် တရုတ်မို ဘိုင်းဖုန်းများက မှိုလိုပေါက်နေပြီဟု ဆိုနေကြတော့သည်။
အင်တာနက်မှ နိုင်ငံရေးဝေဖန်စာသူရေးတာမဟုတ်ဟု စာရေးဆရာကျော်ဝင်း ငြင်းဆို
NEJ / မတ်လ(၃၀) ရက်၊ ၂၀၀၉
လတ်တလော ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် အီးမေးလ်များ မှတဆင့် ပျံ့နှံ့နေသည့် ကျော်ဝင်း ရေးသားသည် ဆိုသော နိုင်ငံရေး စာတမ်းမှာ ၎င်းရေးခြင်း မဟုတ်သလို ၎င်းနှင့်လည်း မည်သို့မှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း စာရေးဆရာ ကျော်ဝင်းက တရားဝင် ငြင်းဆို လိုက်သည်။
ပြည်တွင်းထုတ် The Voice ဂျာနယ် မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ထုတ် စာမျက်နှာ (၉) တွင် ဆရာကျော်ဝင်းက “၎င်းရဲ့အမည်နဲ့ ဘလော့ခ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာအချို့တင်ထားတယ်လို့ ကြားသိရကြောင်း၊ သူဘာမှ မသိလိုက်ရဘဲ ယခုလို အဖြစ်မျိုးကြုံတာ ယခင်ကလည်း ရှိခဲ့ဖူးကြောင်း၊ သူ့အနေနဲ့ လိပ်ပြာသန့်၍ ဘာတခုမှ မဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်း၊ ယခု တကြိမ်မက ဖြစ်လာ၍ စာဖတ်သူများအကြား ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရှိလာနိုင်လို့ တရားဝင် ပြန်ကြားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သူဟာ ပြည်တွင်းမှာ တရားဝင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် လုံးချင်းတွေမှာမှ လွဲပြီး အခြား မည်သည့်နေရာတွင်မှ စာရေးသူ မဟုတ်ကြောင်း၊ မရေးရုံမက ယခု ဘလော့ခ်မှာ တင်ထားတဲ့ စာတွေဟာ သူ့အနေနဲ့ လုံးဝ မဖတ်ဘူးတာမို့ သူ့အယူအဆနဲ့ တူညီမှုရှိမရှိ သူမပြောနိုင်ကြောင်း၊ သူရေးတဲ့စာတွေအတွက် သူတာဝန်ယူပေမယ့် သူမရေးတဲ့စာတွေအတွက် တာဝန်မယူနိုင်သလို ထင်မြင်ချက်လည်း မပေးလိုကြောင်း” စသဖြင့် ရေးသားထားသည်။
ယခုလက်ရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပ အီးမေးလ်များမှတဆင့် ပျံ့နှံ့နေသည့် စာတမ်း (၂) စောင်တွင်မူ ဆရာကျော်ဝင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားသည်ဆိုသည့် What Matter Most in BURMA’s Politics အမည်ရ (၆) မျက်နှာပါ စာတမ်းနှင့် The World Is Flat by Thomas Friedman, The Argumentative Indian by Amartya Sen တို့ကို ကိုးကားပြီးရေးထားသည့် Change: The Fall of The Berlin Wall အမည်ရ (၂) မျက်နှာပါ စာတမ်းတို့ ဖြစ်သည်။
ယခင် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သည့်စာတမ်းများမှာမူ မြန်မာဘာသာနှင့် စာတမ်းဖြစ်သည်။
ဆရာကျော်ဝင်း၏ စာတမ်း၊ ၎င်း၏ ငြင်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝါရင့် သတင်းစာဆရာကြီးတဦးက “ကျော်ဝင်းက မြန်မာပြည်အတွင်းမှာ နေနေတာ။ နောက် စစ်အစိုးရ စာပေစိစစ်ရေးကို ဖြတ်သန်းပြီးမှ ဆောင်းပါးတွေ၊ စာအုပ်တွေ ရေးသားထုတ်ဝေနေရတာ၊ သူ့အယူအဆ ဘယ်လိုရှိရှိ သူ့အနေနဲ့ ငြင်းခုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ သူငြင်းခုံရင် စစ်အစိုးရ ကြိုက်တာရော၊ မကြိုက်တာရော ပါလိမ့်မယ်။ စစ်အစိုးရ မကြိုက်တာဆိုရင် သူ့စာရေးခွင့်၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်ခံရလိမ့်မယ်။ ဒါဆို သူလည်း နစ်နာတယ်၊ စာဖတ်ပရိသတ် တိုင်းပြည်လည်း နစ်နာမယ်။ ဒါကြောင့် သူမရေးဘူး ဆို သူ့အာဘော် မဟုတ်ဘူးလို့ သဘောထားပေးလိုက်ရုံပဲ” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၌ ပြည်တွင်း ဂျာနယ်စာမျက်နှာများတွင် ဦးချမ်းအေးခေါ် စာရေးဆရာကြီး မောင်စူးစမ်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သုံးသပ်ချက်စာတမ်း ထွက်ပေါ်လာပြီး စစ်အစိုးရက ၎င်းတို့ အကြိုက်ဖြစ်သောကြောင့် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အဆိုပါ စာတမ်းကို ဝေဖန်သည့် မည်သည့် စာတမ်းကိုမျှ နောက်ထပ် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခွင့် မပြုခဲ့ပေ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက အိမ်ဖြူတော်တွင် အာဏာရ လာချိန်မှ စ၍ သတင်း များအရ ကမ္ဘာ့ အင်အား ကြီး နိုင်ငံနှင့် ပျက်ယွင်း နေရသည့် ဆက်ဆံရေး ကိစ္စကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် နိုင်ရန် မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ကြိုးပမ်း နေခဲ့ကြ သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အလားတူပင် ၀ါရှင်တန်ရှိ အစိုးရ ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ ချမှတ် ကျင့်သုံးနေသည့် မူဝါဒများကို ပြန်လည် သုံးသပ်နေ သည်ဟု ဆိုလာခဲ့သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရမည့်ကိစ္စမှာ အိုဘားမား အစိုးရအတွက် လွယ်ကူလှ သည့် ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါ။ ပို၍ ဆင်ခြင်ပိုင်းခြားမှုရှိသော၊ မဟာဗျူဟာကျသော ချည်းကပ်မှုမျိုးပြုရန် လိုအပ်ပြီး သတိ ကြီးကြီးထားရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် ၂-ခုအတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များက အာဏာတပြားသားမျှ လက်လွှတ်လျှော့မပေး ဘဲ တင်းခံရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြပြီး၊ ၎င်းအရည်အချင်းကို လျှော့တွက်၍ မရပါ။ မျက်နှာပျက်စရာအကြောင်း ရှိကောင်းရှိမည်။ သို့သော်လည်း သံတမာန်နည်းလမ်းမှနေ၍ နောက်ဆုံး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဖိအားသုံးသည့်နည်း စသဖြင့် နည်းလမ်း ပေါင်းစုံကို အသုံးချကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အနောက်နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာမိသားစုက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်၊ အကူအညီပေးရန် လိုလားကြောင်းပြသ ခဲ့ကြသော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လက်ကမ်းကြိုဆိုသည့်ဟန် မတွေ့ခဲ့ရပါ။
ပုံမှန်ဆိုသလို ပြည်ပမှ မိတ်ဆွေများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် သူတို့က ရွေးချယ်၍ ဆက်ဆံပြီး၊ သတိကြီးကြီးထား လုပ်ဆောင် လေ့ရှိကြပါသည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်နည်း။ စစ်အစိုးရ၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်မှာ အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးသာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမိသားစုနှင့် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာပါက သူတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအာဏာ တိုက်စားခံလာရမည် ကိုလည်း သိနေကြသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များက သူတို့နှစ်သက်ရာ မိတ်ဆွေများနှင့် ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းရန် အကြောင်း ဖြစ်လာပြီး၊ တချိန် သူတို့အတွက် အသုံးမ၀င်ပါက စွန့်ပစ်ရန်လည်း ၀န်မလေးကြပါ။
စစ်အစိုးရ ကျင့်သုံးနေသည့် သံတမာန်ရေးမှာ ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ပို၍ ထင်ရှားလာပါ သည်။ မိမိဘာသာ သိမ်ငယ်နေသည့် သူတို့၏ အငုံ့စိတ်နှင့် နိုင်ငံခြားသားမုန်းတီးရေးဝါဒကလည်း အထင်းသားပေါ်လွင် နေပါသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက အနောက်နိုင်ငံများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့ကို လိုအပ်သလို ခွဲခြား၍ ကစားနေသည် ကို မြင်သာနိုင်သည်။ မြန်မာခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက မစ္စတာဂမ်ဘာရီကို မည်သို့ နှပ်ပစ်ခဲ့သည်ကိုလည်း မမေ့သင့်ပါ။ သူက မျက်နှာသာပေးသည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများနှင့် မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုလည်း သိသာစွာ တွေ့နိုင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၃-လက၊ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက တရုတ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ယန် ဂျေးချီ (Yang Jiechi) ကို နေပြည်တော် တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ကြီးက မြန်မာပြည်တွင်းရေး အခြေအနေများကို ၀မ်းသာအားရ ရှင်းလင်း ပြခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ "မိမိဘာသာ လွတ်လပ်အချုပ်အချယ်ကင်းသည့်မူနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းဆုံးဖြတ်ချက် မူများအရ ဆောင်ရွက်နေသော ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ" ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ မုန်တိုင်း သင့်ဒေသများအတွင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကိုပါ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့်လက ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ လက်စွဲ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးတွင် တွေ့ဆုံပြောကြားရာ၌ သူ၏အစိုးရအနေနှင့် လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် ကုလအထူးသံ မစ္စတာဂမ်ဘာရီကို ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ကြ သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပစဉ်က မစ္စတာဂမ်ဘာရီကို လာရောက်လေ့လာရန် ဖိတ် ကြားခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် စိတ်ဖွယ်စားဖွယ်သတင်းအဖြစ် မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ သံအမတ်များက မဲရုံများသို့ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကား အကြိမ်ကြိမ် နှပ်ပစ်ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စင်္ကာပူ၌ ကျင်းပခဲ့သော အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရ၏တောင်းဆိုချက် အရ သူကတင်ပြမည့်အရေးကို အရေးမပါဟု ပယ်ချခံခဲ့ရဖူးသည်။ ထိုအချိန်က သံဃာများဦးဆောင် သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအပြီး ၂-လအကြာကာလဖြစ်ပြီး၊ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အခြေအနေကို အာ ဆီယံ ခေါင်းဆောင်များထံ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်က မစ္စတာဂမ်ဘာရီအနေနှင့် "ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကိုသာ ပြန်လည် အစီရင်ခံ ရန် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အရှေ့ဖျားအာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရန် တာဝန်မရှိ ကြောင်း" ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်တွင် အစည်းအဝေးက ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့် အစီအစဉ်ကို ရုတ်ချည်းရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်က "ပါမောက္ခဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်များနှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ စေတနာမွန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများကို မြန်မာအစိုးရက ယုံကြည့်မှုအပြည့်ဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း" ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤအချက်မှာ လုံးဝမမှန်ပါ။ မြန်မာ စစ်အစိုးရက ဂမ်ဘာရီအပေါ် ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာ ၎င်းအနေနှင့် သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးဝင်နေသမျှ ကာလ မျှသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သမ္မတအိုဘားမား ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် အာဏာရလာချိန်မှစ၍ စစ်အစိုးရ၏ ယခင်သံအမတ်ဟောင်းများက ၀ါရှင်တန် သို့သွား၍ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သစ်၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒများကို စနည်းနာတီးခေါက်ကြကြောင်း သတင်းများ လည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စဟေလာရီ ကလင်တန် လွန်ခဲ့သည့်လက အာရှနိုင်ငံများ သို့ လာရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း၊ တရုတ်အာဏာပိုင်များနှင့် "သုတေသီ ဆိုသူများ"က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလျှင် အမြန် ပြေးလွှား ရောက်ရှိလာကြပြီး မြန်မာအတိုက်အခံအုပ်စုများ၊ ပြည်ပရှိနေထိုင်သူများနှင့် အမေရိကန်က မည်သို့မည်ပုံ စဉ်းစားနေသည်ကို တီးခေါက်စနည်းနာခဲ့ကြပါသည်။
စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များအနေနှင့် ဒေသအတွင်းရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒုတိယ အကြိမ်အဖြစ် တရားဝင်မဟုတ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် ဆန္ဒရှိနေသည်ဟု ပြည်ပရောက် မြန်မာအတိုက်အခံ များက ယုံကြည်နေကြသည်။ အလားတူပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဘေဂျင်းတွင် ယခင်တခါ ကျင်းပခဲ့သလို၊ ယခုတကြိမ်လည်း ၎င်းနေရာတွင်ပင် ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံစဉ်က မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ၀န်ကြီးများနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ဒု-လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဲရစ်ခ်ဂျွန် (Eric John) တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
လူသူလေးစားခံရသည့် မြန်မာပညာရှင်တဦးက ထင်သာမြင်သာ ဖော်ပြခဲ့ရာတွင် "အပျိုကြီး လင်လိုချင်" သည့်ပုံ ဖြစ်နေ သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ (ဤနေရာတွင် မြင်သာအောင် တင်စားသုံးနှုန်းခြင်းသာဖြစ်ပြီး အပျိုကြီးများကို စော်ကားလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်ပါ။)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာစစ်အစိုးရက သိထားပါသည်။ အပေးအယူ လိုက်လျောမှုများ ပြုရလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ အမေရိ ကန် ပြည်ထောင်စုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးကို ဆက်လက်တောင်းဆို လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုစစ်အစိုးရ၏ "လမ်းပြမြေပုံ" တွင် အင်အားစုများအားလုံး ပို၍ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေရန်လည်း တောင်းဆို လာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုအပတ်ထုတ် ၀ါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ (Washington Post) ၏ ခေါင်းကြီးပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက် ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မူဝါဒများ ပြန်လည်သုံးသပ်ရာ၌ အထူးသတိထားပါရန် သတိပေးရေးသားခဲ့သေးသည်။
"အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် မူဝါဒက ပို၍ ထိရောက်သည့်၊ သေချာပစ်မှတ်ထားသည့် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပို၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရနိုင်သည့်မူဝါဒ မျိုး ဖြစ်နိုင်သည်" ဟု သတင်းစာခေါင်းကြီးက ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၎င်းသတင်းစာကြီးက မှန်မှန်ကန်ကန် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ရာတွင် "မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည့်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လွတ်လပ်စွာ၊ ပြည့်စုံကုံလုံစွာ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှု မရှိဘဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုကို ဖြေလျှော့ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရကို သိစေသင့်ပါသည်။ မစ္စကလင်တန်အနေနှင့် ဤ အချက်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရထံ ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားလိမ့်မည်ဟု မိမိတို့က မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီက ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့ပြီး၊ ထိုအချိန်မှစ၍ အချိန်အတော်များများတွင် သူ့ကို အထီးကျန်ဖြစ်အောင် အိမ်အကျယ်ချုပ်ချ ထား ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်စုကြည် လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စ၊ အခြားထောင်နှင့်ချီသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ နှင့် သူတို့၏မိသားစုများအရေးသည် အထူးအရေးကြီးနေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်" ဟု ဖော်ပြရေးသားခဲ့သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ သေချာသိထားသည့်အချက်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ၎င်းတို့အကျိုးမရှိလျှင် မည်သည့်အခါမျှ လိုက် လျောစေ့စပ်လေ့ မရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက ဤမူကို အထူးကိုင်စွဲထားသည် မဟုတ်ပါလား။
အောင်ဇော် ရေးသားသည့် Than Shwe’s Selective Diplomacy Demands Caution ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆို ဖော်ပြပါသည်။
စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံဖို့ ကရင်ခွဲထွက် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ တွင်း ( ၁ ) ကို ကတိပေး
နအဖ ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ခွဲထွက် အဖွဲ့များက လက်ရှိ တပ်မတော် အစိုးရကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံ အားပေး သွားမည်ဟု နအဖကို ကတိပေး လိုက်ကြောင်း တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) အဖွဲ့၏ အဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင် တဦးက ပြောသည်။
နအဖအတွင်းရေးမှူး (၁) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်မြင့်ဦးနှင့်အဖွဲ့ ယခုလ (၂၁) ရက်နေ့၌ ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့များဖြစ်သည့် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့၊ ပဒိုအောင်ဆန်းအဖွဲ့၊ စောဌေးမောင်အဖွဲ့တို့၏ အခြေချရာ နေရာများသို့ လာရောက်စဉ် အဆိုပါအဖွဲ့များက ကတိက၀တ်ပြု ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့မှ အရာရှိတဦးက “ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ကေအန်ယူနဲ့ ပြန်ပေါင်းဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ ခေတ်ကာလ အခြေအနေက ပြောင်းသွားပြီ။ ကေအန်ယူဘက်က လာတာပဲ ရှိရင် ရှိမယ်၊ ဒီဘက်ကတော့ ဟိုဘက်ကို သွားစရာ မရှိတော့ဘူး၊ လက်ရှိဘ၀ကနေ လက်မဲ့ဘ၀ကို ဘယ်သူမှ စွန့်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
နအဖအတွင်းရေးမှူး (၁) ၏ ခရီးစဉ်သည် ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့များ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေရှည် အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက် လာရောက် တွေ့ဆုံအားပေးသည့် ခရီးစဉ်ဟုဆိုသော်လည်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စရပ်များအတွက် တဖက်လှည့်ဖြင့် ချည်ပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်အောင် လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်သာဖြစ်သည်ဟု ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့ဝင်အချို့က ပြောဆို သုံးသပ်ကြသည်။
နအဖအတွင်းရေးမှူး (၁) နှင့်အဖွဲ့သည် ထော့ကိုကိုးရွာတွင် ကေအန်ယူ/ကေအန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ယခင်လက ကေအန်ယူမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့သို့ ကူးပြောင်းသွား သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ၏ သားငယ် စောနေစိုးမြကိုလည်း ငြိ်မ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေဖြင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့်သတင်းကို ယခုလ (၂၄) ရက်နေ့ညက မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတွင် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
ကရင်ခွဲထွက် အဖွဲ့တခုမှ ယာဉ်မောင်းတဦးက “အခြေအနေမှန်ကို အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွန်သွားပြီ။ ကိုယ်လိုချင်တာကို ဥပဒေဘောင်ထဲက တောင်းမယ်ဆိုပြီး ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ် ဆိုတဲ့လူတွေ သူတို့ဆီက ဘာမှ ဖမ်းလို့မရဘူး။ ကိုယ့်ကို ပြန်မဖမ်းနိုင်အောင်ကိုဘဲ မီးစင်ကြည့်ပြီး လှုပ်ရှားနေရတယ်။ ကျနော်ဆိုရင် မာနယ်ပလော ဌာနချုပ်မှာနေတုန်းက အကောင်၊ အခုတော့ အဖွဲ့က ထောင်ထားတဲ့ ခရီးသည်တင်ကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာလိုလို ကုန်သည်ပွဲစားလိုလိုဖြစ်သွားပြီး ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတမျိုး၊ ဖြစ်လာတာကတမျိုး ကိုယ်ရွေးတဲ့ လမ်းဆိုတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) မှ ခွဲထွက်သွားသည့် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့၊ ပဒိုအောင်ဆန်း ဘုရားကုန်းအဖွဲ့၊ စောဌေးမောင် ဦးဆောင်သည့် ကေအန်ယူ/ကေအန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့များ သည် နအဖ ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံကြသော်လည်း ကေအန်ယူ အဖွဲ့ကမူ လူထုဆန္ဒနှင့်အညီမဟုတ်ဘဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း အဖွဲ့၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပဒို ဒေးဗစ်သကဘောက ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ပဒိုအောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဘားအံမြို့နယ် ဘုရားကုန်းရွာတွင် အခြေချပြီး ဦးသာထူးကျော် ခေါင်း ဆောင်သည့် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့သည် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူရွာတွင် ဌာနချုပ် အခြေစိုက်ကာ စောဌေးမောင်ဦးဆောင်သည့် ကေအန်ယူ/ ကေအန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့သည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ထော့ကိုကိုး ကျေးရွာတွင် အခြေစိုက်သည်။
( 35 )Karen Christians Face Joint Army and Buddhist Onslaught
( 34 )သံလက်သီးကြောင့် မျက်လုံးကွယ်သည့် နိုင်ငံရေးသမားကို ထောင်ပြောင်း
( 33 )Myanmar to host ASEAN energy meeting in second largest city
( 32 )မြန်မာကျောင်းတခု ထိုင်းရဲတို့ဝင်ဖျက်
( 31 )Bangladesh seeks official communication from Myanmar on its planned border fencing
( 30 )မြန်နှုန်းနှေးသဖြင့် ရန်ကုန် အင်တာနက်ဆိုင်အချို့ ပိတ်ထား
( 29 )Myanmar reassures Bangladesh over border row
( 28 )မန္တလေး နန်းတွင်းမီးလောင်
( 27 )Six houses gutted in Hakha City
( 26 )ပြည်သူ့ ရင်ပြင်နှင့် ပြည်သူ့ ဥယျာဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု ပုဂ္ဂလိကသို့ ပြောင်း
( 25 )Skeptics Question Burma’s Internet Slowdown
( 24 )ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ လျော်ကြေးရရန် ထိုင်းအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ပြောဆို
( 23 )General’s Promotion Signals Power Struggles at the Top
( 22 )ဘန်ကောက် Iron Cross ပွဲသွား မြန်မာများ ရာနှင့်ချီ အဖမ်းခံရ
( 21 )Burma political prisoners jailed for wearing white
( 20 )ထိုင်းနိုင်ငံ IC ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ အဖမ်းအဆီးများ ရှိခဲ့
( 19 )Rights group demands migrant compensation
( 18 )Burma again chastised for lack of religious freedom
( 17 )မြ၀တီ လောင်းကစား သမားတဦး ဒီကေဘီအေ ပစ်သတ်လို့သေ
( 16 )မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ကင်းမဲ့ဟု ဝေဖန်ခံရပြန်
( 15 )Popular Burmese Snack Tainted with Chemical Dye
( 14 )Tata Motors setting up heavy trucks unit in Myanmar
( 13 )Pro-League (၈) သင်းမှ အားကစားသမားအချို့ စာချုပ်ပါ အားကစားကြေး အလျှော့ခံနေရ
( 12 )Authority Issues Orders on Police Deserters
( 11 )ကာလကတ္တား ထောင်ရောက် ရခိုင်-ကရင် ၃၄ ဦး အမူ ရုံးချိန်း ထပ်ရွှေ့
( 10 )Burmese Alcohol Seized in Bangladesh
(9)မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို တာဝန် ဆက်ပေး
( 8 )Bangladesh expresses concern over Myanmar fence
(7)မတရားသင်း ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းရန် ရှေ့နေကောင်စီ တောင်းဆို
(6)Myanmar gives FM radio concessions in provinces prior to polls
(5)ဆိုးဆေးပါသည့် လက်ဖက် ၅၇မျိုးစာရင်း ကျန်းမာရေးဌာန ထုတ်ပြန် သတိပေး
(4)20 Myanmar teas recalled
(3)အာဏာပိုင်များ နှောင့်ယှက်၍ သံဃာတော်များ လက်မှတ်ရေးထိုး အရေးဆိုပြီ
(2)ရခိုင်အမျိုသမီး အမတ် ဒေါ်အေးသိန်း ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို
( 1 )ကလေးများ ပျောက်ဆုံးပြီး အရွယ်မတိုင်မီ စစ်တပ်ထဲ အသွင်းခံရမှုများ ဖြစ်ပွားနေဆဲ
visited the Long Neck Karen hill tribe near Mae Hong Son in Thailand. I must admit I felt like I was strolling ontoapage ofaNational Geographic magazine. I was there in 1997avery long time ago! When in the presence of the people they spoke of longing to go back to their homeland and here they are twelve years later still without citizenship oraplace to call their own.
In this tribe the women worealong piece of brass coiled around their necks, legs and arms. There are numerous stories explaining why the coils exist. Some say for protection against tiger attacks. I have also read they would do this to make their appearance unsightly to avoid slave trade. When I asked them why this was done most of them responded with the answer, “Tradition!” Although their necks look elongated the brass rings in fact push their shoulder and collar bones down. Their necks are no different from yours or mine even though it appears to be longer. These coils are put on their necks atavery young age if removed their neck muscles are so weak they are unable to lift their own heads. This may seem like cruel and unusual punishment to me, but who am I to judgeapeople for their cultural beliefs because I do not understand it?
The tribes are refugees from Burma (Myanmar) fleeing from genocide of their ethnic race. There is much talk about the Thai people exploiting them for money and using them asatourist trap. They are forced to continue this tradition that their culture created in order to live in servitude under tourists gazing eyes. When I learned of the human rights violations done towards these people on Burmese soil I thought thank goodness they hadaplace to flee. I’m sure there is some exploitation taking place. I can not speak for them but it seems they choose to stay in these camps rather than go back to Burma and be slaughtered. The Thai government is not very open to letting Burmese refugees into their borders. The Long Neck Tribes are welcomed because of their distinctive appearance. So their options are to live in the camps or go back and risk death. The government in fact had created laws that benefit and helped the refugees. Unfortunately the people who own the camps prevent the refugees from utilizing these rights for fear of losing their profits asaresult.
My emotions are mixed because no one should be displayed as an exhibit. They are fascinating people, friendly and always smiling. They deserve respect and are definitely worth learning more about. Inaperfect world these people would be able to go back to their homes and live as they see fit, making their own choices and living under their own accord. Since we do not live inaperfect world I am comforted inasmall way knowing they are safe and able to live with their families. So many times all over the world refugees face so many hardships of separation, mistreatment and abuse.
I did not takeatour out there I had rentedamotorbike and made the journey on my own. So in my defense I did not fundatourist agency in order to go see these people. There isagate at the entrance that you have to pay an entry fee in order to enter into the camp. Inside the camp the people have shops and sell different items like soap, crafts and postcards etc. not very different fromalocal pharmacy. To be honest I do not know if over the years the tourists’ numbers have grown but when I was there, there were no other tourists except myself and the person that was with me. Music seemed to beabig part of their culture and the ladies would bust out in song plucking on their hand made guitars without solicitation. Beingamusician myself I thought I stumbled uponacreative Mecca. The children were as curious of me as I was of them, touching my clothes and giggling and hiding their smiles behind their tiny fingers. They lived in extreme humble means mostly wooden huts with grass rooftops. Looking back now I do not know if the smiles were faux but I do know it was the highlight of my Thailand experience. Those people touched my heart and I genuinely want nothing more for them than happiness.
Sometimes in the world we live right and wrong are as clear asalooking glass. Other times there are fine lines and the looking glass becomesalittle cloudy. If I had my choice no one would suffer. That however is notarealistic point of view. I wish I could say with certainty visiting them does help and they do not mind. I can not say with certainty that staying away is beneficial either. They are there and have been for quite some time. My conscience tells me to keep them in my thoughts and prayers hoping one day they will find the answer and will live in peace inacountry that loves and respects them. No matter how we try certain issues are what they are be it good or bad, using your own conscience you decide whetheravisit is right for you.
နယ်စပ် အကြောင်း စုံစမ်းရန် မြန်မာ သံအမတ်အား ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဆင့်ခေါ်
Narinjara News 3/29/2009
မောင်သန်းစိန် (နိရဉ္စရာ) ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက်တွင်မြန်မာ ဘက်မှ ခြံစည်းရိုး ကာရံ မည့်အစီ အစဉ်နှင့် နယ်စပ်ဒေ သအတွင်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ချထားမှု များအပေါ် စုံစမ်း မေးမြန်းရန် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ မြန်မာ သံအမတ်အား လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်နေ့က ဆင့်ခေါ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း Jai Jai Din ဘင်္ဂလီ သတင်းစာက ဖေါ်ပြသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အတွင်းဝန် တိုဟိဒ်ဟူဆိန်းက လက်ရှိ မြန်မာဘက်မှ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနိုင်ရန် မြန်မာ သံအမတ် ဦးဖေသန်းဦးကို ၄င်း၏ရုံး၌ ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလ အစောပိုင်းတွင် အိန္ဒိယနှင့်ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နယ်စပ် တစ်လျှောက်တွင် မြန်မာဘက်မှ တပ်အင်အားများ တိုးချဲ့ ချထားပြီး၊ ခြံစည်းရိုး ကာရံရန် ပြင်ဆင်နေသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်း ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာ သံအမတ်မှ မည်သို့ မည်ပုံ ရှင်းလင်းခဲ့သည်ကို တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
မြန်မာ၏ လုပ်ရပ်များကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ရန် ၄င်း၏ နယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ့ ဘီဒီအာရ်ခေါ် ဘင်္ဂလာရိုင်ဖယ်အား ညွှန်ကြား ထားပြီ ဖြစ်သည်ဟု ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောကြားသည်။
ဘီဒီအာရ် ဗိုလ်မှူးချုပ် မွိုင်နူဟူဆိန်း၏ ပြောကြားချက်အရ “ နယ်စပ် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်များတွင် နယ်စပ်(၅) ကီလိုမီတာ အတွင်း လက်နက်ကြီးများ တပ်ဆင်ခွင့် မရှိကြောင်းနှင့် ကိုက်(၃၀၀) အတွင်း ခြံစည်းရိုး ကာရံခွင့် မရှိကြောင်း” သိရသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှမှ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဘီဒီအာရ်အနေဖြင့် မြန်မာဘက်မှ စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှု ရှိမရှိကို မျက်ခြေ မပြတ် စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြောင်းလည်း သူက ထပ်မံ ပြောကြား ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၈-ခု နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းက မြန်မာဘက်မှ ဘင်္ဂလာ ရေပိုင်နက်အတွင်း ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ စမ်းသပ် ရှာဖွေခဲ့သဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဤခေါင်းစဉ်ကား ယခု ထွက်ခွာမည့် သင်္ဘောကြီး ၏ ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ သဘောင်္ကြီးကား ငါ့မြင်းငါစိုင်း ဟု အမည်တွင်၏။ မာလိန်မှူးကား သင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းက မခွာမီ ယူနီဖောင်း အပြည့်အစုံ ၀တ်ဆင်လျက် သင်္ဘောဦးရှိ ကုလားထိုင် ပေါ်တွင် ဇိမ်ကျကျ၊ စတိုင်ကျကျ ထိုင် လျက် ၀ီစကီကို ကျိုက်၊ စီးကရက်ကို ဖွာရှိုက်လျက်ရှိသည်။
ကမ်းပေါ်တွင်မူ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းများ သူ့အုပ်စုနှင့်သူ ရှိနေကြသည်။ သင်္ဘောထွက်ခွာမည့် ခရီးစဉ်ကို မကြိုက်နှစ်သက်သလို ကြိုဆိုဧည့်ခံ နေရာချထားရေးမှာလည်း ညံ့ဖျင်းလှသဖြင့် လိုက်ရကောင်းနိုး၊ နောက်တစီးကို စောင့်ရကောင်းနိုး ဖြစ်နေလေ၏။ ဤနေရာတွင်မူ သဘောင်္တစီးနှင့်တစီး အချိန်ကွာခြားချက်မှာ အနှစ် ၂၀ ခန့် ကြာပေသည်။ ထို့ကြောင့် စောင့်ရဖို့မှာလည်း စိတ်မောစရာကောင်းသလို လိုက်ရဖို့မှာလည်း စိတ်တိုင်းကျစရာ မရှိသည့် ခရီးစဉ် ဖြစ်နေသည်။
မြို့မိမြို့ဖ တချို့က သင်္ဘောပေါ်တက်ဖို့အရေး လူကြီးလူကောင်း ဂုဏ်အင်္ဂါနှင့် လျော်ညီစွာ ဧည့်ခံခင်းကျင်းစေလိုသည်။ ရွှေထီး၊ ရွှေဖိနပ်၊ ရွှေဝေါ၊ ရွှေကုလားထိုင်တို့ဖြင့် သိုက်မြိုက်စွာ တက်လိုသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ရွှေကုန်းဘောင်ပါ ထိုးပေးစေလိုသည်။ မာလိန်မှူးမှာမူ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ မရှိသော မျက်နှာထားဖြင့် တောင်းဆိုချက်မှန်သမျှကို တွင်တွင်ကြီး ပယ်ချလျက် ၀ီစကီကျိုက်မပျက်၊ စီးကရက် ရှိုက်မပျက် ရှိလေသည်။
တဖြည်းဖြည်းနှင့် သင်္ဘောထွက်ခွာရန် ရေတက်ချိန် ရောက်လာပြီး သတ်မှတ်ချိန် ၂၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ထွက်ခွာမည့်အကြောင်း စပီကာနှင့် အော်ဟစ်လေသည်။ သူတစု၊ ကိုယ်တစု တောင်ရှည်ပုဆိုးကြီးများနှင့် ခေါင်းပေါင်းစ တထောင်ထောင် မြို့မိမြို့ဖများမှာ တချို့က ခပ်တင်းတင်းပင် တောင်းဆိုတာမရလျှင် နေခဲ့ကြမည်ဆို၏။ တချို့က ခရီးစဉ်ကို မကြိုက်သော်လည်း မာလိန်မှူး၏ ငါ့မြင်းငါစိုင်း သဘောင်္ကြီးကို မနှစ်သက်သော်လည်း နောက်တကြိမ် သင်္ဘောဆိုက်ဖို့ နှစ် ၂၀ မက ကြာကောင်းကြာမည်ဖြစ်ရာ ယခုလက်ရှိ သဘောင်္နှင့် ရောက်သလောက် လိုက်သွားပြီးမှ ကိုယ့်ခရီးကိုယ်ဆက်ဖို့ စီစဉ်ကြလေ၏။
သင်္ဘောကြီးကား ထွက်ခွာကာနီးပြီဖြစ်၍ အချက်ပေးဥဩ ဆွဲလေသည်။ တချို့လည်း တောင်ရှည်ပုဆိုးမ၍ ကသုတ်ကရက် ပြေးတက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြ၏။ တချို့လည်း လိုက်ရမည်လို၊ နေရစ်ရမည်လို ဝေခွဲမရ။ နောက်လာမည့် သင်္ဘောကို လှမ်းမျှော်ကာကြည့်ရင်း သက်ပြင်းချကြ၏။ သင်္ဘောကပ္ဗတိန် မာလိန်မှူးကြီးကား စုတ်ပဲ့စွာ ပြုံးရင်း သူ့စိတ်ကြိုက် ခရီးစဉ်ကို စဉ်းစားကြည်နူးနေလေ၏။
တစုသော မြို့မိမြို့ဖ တဖွဲ့ကား သားကတဖက်၊ သမီးကတဖက်၊ ယောက္ခမက တဖက်နှင့် အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်လျက် တွန်းတွန်းထိုးထိုး ရှိကြလေ၏။ ယောက္ခမကြီးတို့ကား လူကြီးပီပီ ရသမျှနှင့် တင်းတိမ်ဖို့၊ လူငယ်တို့ကား အပြည့်မှ မရလျှင် တ၀က်နှင့် မကျေနပ်နိုင် ဆို၏။ တချို့ကား ကိုယ့်လူကိုယ့်ဘက်သား၏ အရိပ်အကဲကို အကဲခတ်လျက်ရှိ၏။
ရွှေထီး၊ ရွှေကျိုင်း၊ ရွှေသိုင်း၊ ရွှေဝေါ၊ ရွှေထိုင်ခုံ ပါမှ အခမ်းအနားပါမှဟု တင်းခံရစ်သူတို့က မရမနေ ဇွဲကြီးနေလေ၏။ မာလိန်မှူးကား လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ရှိသော ကုန်းဘောင်ကို ထိုးပေး၏။ ညစ်ပတ်ပေရေနေသော နေရာထိုင်ခင်းတုိ့ဖြင့် ဧည့်ခံ၏။ ထိုင်ချင်ထိုင် မထိုင်ချင်နေ၊ လိုက်ချင်လိုက် မလိုက်ချင်နေ သင်္ဘောကား သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း အတိအကျ ထွက်ခွာမည်ဟု သဘောရနေ၏။
မြို့မိမြို့ဖတို့နောက်မှ အကဲခတ်နေကြသော မြို့ခံလူအုပ်ကြီးကား ကိုယ့်လူကြီးများ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ လှမ်းကြမည်ကို စိတ်စောနေ၏။ ဟန်မှဟန်ပါ့မလား တွေးကြ၏။ ကိုယ့်လူကြီးများ တောင်းဆိုနေကြသော ရွှေထီး၊ ရွှေခမ်းရွှေလမ်းတို့ကား ပေါ်လာမည်မထင်။ သင်္ဘောပေါ်တွင်လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူး။ မြို့မိမြို့ဖတို့ကား တွေဝေနေ၏။ မြို့ခံလူအုပ်ကြီးကား ပြူးကြောင်ကြည့်နေ၏။ ငါးမရလည်း ရေချိုးပြန်မည့်သူများကား သင်္ဘောပေါ် အလုအယက် တက်ကြ၏။ သင်္ဘောဦးမှ မာလိန်မှူးကြီးကား မည်သူ့ကိုမျှ အရေးစိုက်ဟန် မရှိသော်လည်း ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေပုံ ရလေ၏။ ငါ့မြင်းငါစိုင်း သင်္ဘောကြီးကား ရှေ့တွင် စောင့်မျှော်နေသော လှိုင်းကြားလေကြား၊ မုန်တိုင်းကြား ဇွတ်တိုးသွားမည် ပြင်နေ၏။ ရှေ့တွင်စောင့်မျှော်နေသော ကျောက်ဆောင် ကျောက်တန်းတို့ကို ခေါင်းခံပြီး တိုက်မည့် ပဲ့ကိုင်နှင့် ရေကြောလေကြော နားမလည်သော ခရီးသွားတို့ကား အကြောင့်အကြ ကင်းနေသည်လော။ စိတ်ဖောက်နေသည်လော အမှန်ပြောဆိုရန် ခက်ပေလိမ့်မည်။
လူတချို့ကား သင်္ဘောခရီးစဉ် မှားနေပြီဟု ပြောဆိုနေကြ၏။ သည်ခရီးသည် မိမိတို့လိုရာသို့ မရောက်နိုင်ဟု ကြီးမားလှသော ဉာဏ်ဖြင့် သုံးသပ်ကြလေသည်။ တချို့ကား နောက်သင်္ဘောစောင့်ရင်း အလုပ်မပျက် လုပ်ကိုင်ရင်း ကျွဲကူးရေပါ စခန်းသွားလိုကြ၏။ မြို့ခံလူထုကြီးကား မြို့မိမြို့ဖများကို မှာစရာရှိသည်များ မှာကြားထားပြီဖြစ်၍ ခရီးဘယ်လိုဆက်မည် ဆိုသည်ကို သိလိုကြ၏။ သည်လမ်း၊ သည်စခန်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သင်္ဘောလည်း မဆောက်နိုင်၊ မ၀ယ်နိုင်၊ ခရီးကြုံသဘောင်္ကိုလည်း စိတ်တိုင်းမကျ စောင့်ရမည်ကိုလည်း မနှစ်သက်၊ မထွေးနိုင် မမျိုနိုင် ဖြစ်နေလေသည်။
မည်သို့ဆိုစေ ၂၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်အတွင်း ထွက်ခွာမည့် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး သဘောင်္ခရီးစဉ်ကြီးကို မောင်းနှင်တော့မည့် ငါ့မြင်းငါစိုင်း သဘောင်္ကြီးကား ဘယ်လူးညာလူးရင်း လှိုင်းအထပ်ထပ်ထဲ တိုးဝင်သွားပေတော့မည်။
နအဖ စစ်အစိုးရ လက်အောက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် “ဖါလမ်း” များ အထူးတိုးပွားလာ
နအဖ စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အ၀န်းတွင် “ဖါလမ်း”များ အထူး တိုးပွားလာ သည်ဟု ခရီးသည် တဦးက ပြောသည်။
သူက “ဖါလမ်းဆိုလို့ တမျိုးတော့ မတွေးပါနဲ့။ လမ်းတွေကို အသစ်ပြန် မလုပ်ဘဲ ဖါပြီး အသုံးပြုနေ တဲ့အတွက် “ဖါလမ်း” လို့ လူတွေက ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လမ်းဟူသမျှ လမ်းခင်းကျောက် တွေနဲ့ ရောမွေထားတဲ့ ကတ္တရာစေး တွေကို ဖါပြီး အသုံးပြုတဲ့ လမ်းတွေသာ များပါတယ်။ အသစ် လုပ်တာ တလမ်းမှ မရှိဘူး။ ဒါကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖါလမ်းတွေ တိုးပွားလာတယ်လို့ ပြောရတာ ပါ” ဟု ပြောသည်။
၁၆ မိုင်သာ အကွာအဝေးရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အဓိက အချက်အချာကျသော ဘူးသီးတောင်-မောင်တောကားလမ်းမှာ မိုးတွင်းက ရေတိုက်စားမူကြောင့် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခဲ့သော်လည်း ပြန်လည် ကတ္တရာခင်းခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ ကွက်ကြား ကွက်ကြား ဖါထေးပြီး အသုံးပြုနေသဖြင့် လူအများက ဘူးသီးတောင် မောင်တောလမ်းကို “ဖါလမ်း” ဟု ခေါ်ဆိုနေကြသည်။
အလားတူ စစ်တွေမြို့တွင် လမ်းများ ပျက်စီးနေသော်လည်း မြို့နယ် စည်ပင်သာယာမှ လမ်းများကို အသစ် ကတ္တရာများ ခင်းခြင်း မရှိဘဲ ပေါက်သွာသော လမ်းများကို ကတ္တရာဖြင့် ဖါပြီး အသုံးပြုနေသဖြင့် စစ်တွေမှ လမ်းများမှာလည်း “ဖါလမ်း”များ ဖြစ်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ခရီးသည်က “ဘူးသီးတောင်-မောင်တောကားလမ်းက လမ်းဟောင်းဆိုတော့ လမ်းပေါက်တာကို ဖါထေး အသုံး ပြုနေသေး ဆိုတော့ တော်ပါသေးတယ်။ စစ်တွေ-ရန်ကုန် ကားလမ်းက ဖါထေးဖို့ထား ဘာမှ မပြင်ဘဲ ပစ်ထားတဲ့ အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် တွေ ဘတ်စ်ကားနဲ့ မသွား မလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။” ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။